ကြောငျးပိတျရကျတိုငျး သတိရနမှောပါ – My Blog
ကြောငျးပိတျရကျတိုငျး သတိရနမှောပါ (စ/ဆုံး)
” အ … အမေ့ … ကိုမငျးနိုငျ … ဖွညျးဖွညျး လုပျပါရှငျ … အဟငျ့ ဟငျ့ “ ဒျေါစန်ဒာကြျော တယောကျ သူမတို့ လငျမယား အိပျသော ကုတငျပျေါတှငျ လေးဖကျထောကျကာ ဖငျဘူးတောငျး ထောငျပေးထားရ၏။ ကော့ထှကျ ဝိုငျးစကျနသေော ဖငျသားစိုငျ ဖှေးဖှေး ၂ခွမျးကွား စောကျပတျမှာ ဖေါငျးကွှ ထှကျနေ ပွနျသညျ။ ဦးမငျးနိုငျမှာ ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ခါးလေး အား လကျနှဈဘကျဖွငျ့ စုံကိုငျ ကာ ဆှဲလိုးနေ၏။ ဦးမငျးနိုငျ လီးကွီး သူမအဖုတျထဲ တိုးဝငျလာတိုငျး စောကျခေါငျး အတှငျးသားမြားက အလိုလြောကျ ညှဈပေး မိ နပွေနျ၏။ လငျတျောမောငျ၏ ကြောငျးနဖေကျ သူငယျခငျြး ဖွဈသူ နိုငျငံခွားမှ ခဏ ပွနျလာသော ဦးမငျးနိုငျအား လငျဖွဈသူ ဦးနေ ဇျော မသိအောငျ အိပျခနျးထဲ အလိုးခံနရေသညျ့ အဖွဈ။ တှေးရငျး ဝမျးနညျးလာကာ မကျြရညျမြား ဝဲလာစဉျ စောကျဖုတျထဲမှ မာကြော တောငျ့တငျးသော လီးကွီး၏ အရသာက ထူးကဲနပွေနျသညျ။
လငျဖွဈသူ လီးထကျ ထှားကွိုငျး တုတျခိုငျသော ဦးမငျးနိုငျ လီးမှာ တခြီထဲနှငျ့ သူမ ကာမစိတျအား သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့၏။ စောကျပတျ ထဲ လီးကွီး ဖိသှငျး လိုကျတိုငျး စီးစီးပိုငျပိုငျနှငျ့ စောကျခေါငျးထဲ ကငျြစိမျ့ပွီး အိမျထောငျ သကျတမျး တလြှောကျ တခါမှ မရဘူး သော ကာမအရသာလေး ရရှိနသေညျ။ ကုတငျပျေါ အိပျယာခငျးအား ခပျတငျးတငျး ဆုပျကိုငျကာ ခေါငျးလေး မော့တကျနရေငျး ညညျးနရေ၏။ လီးကွီး တိုးဝငျလာတိုငျး ဖငျကွီး နောကျကော့ပေးရာ မိနဈနှဈဆယျ လောကျ အကွာတှငျ စောကျခေါငျးထဲ ကငျြစိမျ့ လာကာ ထိနျးထားသညျ့ ကွားမှ စောကျရညျမြား ပနျးထှကျကာ အထှဋျထိပျ ရောကျသှားရ၏။ ဦးမငျးနိုငျမှာလညျး လညျပငျးကွော မြား ထောငျလာကာ မနားတမျး ဆောငျ့လိုးရငျး သူမစောကျခေါငျးထဲ လရညျမြား ပနျးထညျ့ ပဈတော့သညျ။ လရညျမြား ကုနျစငျ သညျနှငျ့ အဖုတျထဲမှ လီးအား ထုတျကာ ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ပါးစပျနား တပေ့ေးလိုကျပွနျ၏။ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ လငျ ဖွဈသူ လီး တောငျ ကလေး တယောကျ ရသညျအထိ မစုပျခဲ့ဖူးပေ။ သူစိမျး ယောကငြ်္ား၏ လီးအား မလှနျဆနျ နိုငျပဲ အသကျအောငျ့ကာ ပွောငျစငျ နအေောငျ စုပျပေး လိုကျရတော့သညျ။
” အားပါးပါး … ရှီးးးး … စန်ဒာရယျ … အားဟား … ရပွီ ကုတငျပျေါကဆငျးပွီး … ပါးစပျလေး … ဟထား “ ” ရှငျ … ဘာ ဘာ ဘာ လုပျ … မလို့လဲ … ကိုမငျးနိုငျ “ ” စကားမမြားနဲ့ … စန်ဒာ … မငျးနဲ့ငါ လိုးထားတဲ့ … ဗှီဒီယို ဖိုငျလေး … မငျးယောကငြ်္ား နသေေျာ့ ဖုနျးထဲ ပို့လိုကျရမလား “ ” ဟငျ … မ လုပျ ပါ နဲ့ … ကမြ ရှငျခိုငျးတာ … လုပျပါ့မယျ “ ဒျေါစန်ဒာကြျော မကျြနှာလေး ဖှေးစှပျသှား ကာ ကွောကျစိတျမြား ဝငျရောကျလာခဲ့၏။ ဦးမငျးနိုငျ စိတျတိုငျးကြ ကုတငျအောကျ ဆငျးကာ ဒူးထောကျလကျြ အနထေားဖွငျ့ ပါးစပျလေး ဟထားပေးလိုကျရသညျ။ ဦးမငျးနိုငျမှာ ခန်ဓာကိုယျ ဗလာဖွငျ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူ၏ မယားခြောလေးအား စူးစိုကျကွညျ့ ကာ ကုတငျပျေါမှ ခွနှေဈခြောငျး တှဲလောငျး ခထြိုငျလိုကျ၏။ ထူကဲသော မကျြခုံးနှငျ့ မကျြရညျဝဲနသေော မကျြနှာခြောခြောလေး အား ခေါငျးမှ ဆှဲယူကာ ပေါကျကွားထဲ သှငျးပွီး ဟထားသော နူတျခမျးဖူးဖူး လေးထဲ သေးပေါကျထညျ့လိုကျတော့သညျ။
” အု … ဝူးးး ဖလူးး ဖလူးလူးးး … ဂှတျ ဂှတျ … အှိ … ဝု ဖလူးးးး “ ” ရသလောကျ မြိုခြ … စန်ဒာ … အငျး ဟုတျတယျ “ ဒျေါစန်ဒာ ကြျောမှာ ၂ကွိမျ တိတိ အလိုးခံပွီးတိုငျး ဦးမငျးနိုငျ သေးမြား သောကျနရေ၏။ မကျြရညျမြား စီးကလြာရငျး ငံကြိကြိ သေးမြားအား ကွိတျမိတျ မြိုခြ ပဈလိုကျ တော့သညျ။ ” ရပါပွီ … ငါ အပွငျသှားဦးမယျ … အျော ဒါနဲ့ … ညကြ … နသေေျာ့ အရကျခှကျထဲ … ငါ ပေးတဲ့ အိပျဆေး ထညျ့ဖို့ မမနေဲ့ “ ပွောပွီးသညျနှငျ့ ဦးမငျးနိုငျမှာ ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ မကျြနှာ အနှံ့ လီးဖွငျ့ပှတျကာ ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျ သှား တော့၏။ ဦးမငျးနိုငျ အပွငျ ထှကျသှားတော့မှ ဒျေါစန်ဒာကြျော တယောကျ အိပျယာပျေါ ဝမျးလြား မှောကျကာ စိတျလှတျ ကိုယျ လှတျ ငိုခလြိုကျသညျ။ လှနျခဲ့သော ၂ရကျခနျ့မှ အဖွဈပကျြမြားအား ပွနျတှေး နမေိ၏။
” စန်ဒာ … သီတငျးကြှတျ ကြောငျးပိတျရကျကြ … ကလေးကို … သူ့ အဘှားအိမျ ပို့ထားလိုကျပါ့လား “ ” ဟငျ … ဘာလို့လဲ … ကို သျော ကလညျး “ ” စန်ဒာနဲ့ လှတျလှတျ လပျလပျ … မနရေတာ ကွာပွီလေ “ ” အိုရျ … ကိုသျောနျော … အသကျကွီးမှ ယှမနနေဲ့ … ဟှနျ့ “ ဒျေါစန်ဒာကြျော ရှကျပွုံးလေးနှငျ့ လငျတျောမောငျအား ပွနျပွောနသေညျ။ သူမကိုယျတိုငျလညျး တခါတခါ စိတျလှတျကိုယျ လှတျ ပြျောခဲ့ကွသညျ့ အိမျထောငျဦး ဘဝ အစလေးအား သတိရမိနေ၏။ အသကျ ၃၅နှဈသာ ရောကျလာရာ ခုထိ လငျဖွဈသူနှငျ့ သားလေး ကြျောကြျော အတှကျသာ စဉျးစားပေး၏ သူမ အတှကျ မစဉျးစား မိပေ။ သားလေး ကြျောကြျောမှာ ဒီနှဈ သူငယျတနျး စ တကျနပွေီ ဖွဈသညျ။ ၆နှဈခနျ့ ကလေး အတှကျနှငျ့ အခြိနျကုနျလာရာ ကာမစညျးစိမျလေးမြား မဝတဝဖွငျ့ နလောခဲ့ရ၏။ ခု ခငျပှနျး ဖွဈသူ ဦးနသေျော ပွောမှ ရမ်မကျစိတျလေး နိုးထ လာခဲ့တော့သညျ။
” ဟော … ဘာတှေ စဉျးစားနတောလဲ … စန်ဒာရယျ “ ” ဘာမှ … မဟုတျပါဘူး ကိုသျော ရယျ သားလေးကို ကြောငျးပိတျရကျ … အ မတေို့ဆီ စန်ဒာ သှားပို့လိုကျပါ့မယျ … ဒါပမေယျ့ ကိုသျော … သောကျရငျ အိမျမှာပဲ … သောကျရမှာနျော … အပွငျ မသောကျရဘူး “ ” အငျးပါ … ၁၀ရကျစာ … ဘီယာ ဖာလိုကျ ဝယျထားလိုကျမယျ … စန်ဒာက … အမွညျးလုပျပေး “ ” လုပျပေးမှာပေါ့ … အပွငျမ သောကျရငျ … ပွီးရော “ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ ကလေးအမေ ဖွဈသျောလညျး ခုထိ နုနယျခြောမောတုနျးပငျ။ အသားဖွူပွီး ခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစားက ခုထိ လူတိုငျး ငေးယူရ၏။ ယောကျြား ဖွဈသူ ဦးနသေျောမှာ ကုမ်ပဏီ တခုမှ စာရငျးစဈ တယောကျမို့ မကွာခဏ နယျမှ ကုမ်ပဏီ ရုံးခှဲမြားသို့ ခရီး ထှကျလရှေိ့သညျ။ ဦးနသေျောမှာ အသကျ ၃၈နှဈမို့ ဒျေါစန်ဒာကြျောထကျ ၃နှဈခနျ့ ကွီး၏။ အပြိုဘဝ တှငျ ကုမ်ပဏီ အရောငျး စာရေး ဝငျလုပျရာ ဦးနသေျောနှငျ့ တှကေ့ာ အိမျထောငျကခြဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ ကလေး တဈယောကျရပွီး နောကျထပျ မယူတော့ပေ။
ဦးနသေျောမှာ စကားပွော ပါးနပျ၍ လူပေါငျးဆနျ့သဖွငျ့ ကွားပေါကျဝငျငှမြေားပါ ရရှိနေ၏။ ဒျေါစန်ဒာကြျောတို့ သားအမိအား နှဈ ထပျတိုကျ ဆောကျပေးကာ အိမျဖျေါ ထားရှိပေးသညျ။ အိမျထောငျကကြတညျးက မယားခြောလေးအား အလုပျထှကျစကော အိမျ မှာပငျ အေးဆေး နခေိုငျးထား၏။ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ အိမျဖျေါ ဒျေါညှနျအား အိမျမှု့ကိစ်စမြား ကူလုပျရငျး လငျတျောမောငျ အိမျပွနျ ရောကျလငျြ ကိုယျဖိရငျဖိ ပွုစုပေးရုံပငျ။ ခတျေမျှီစှာ နထေိုငျသျောလညျး ဦးနသေျောအား ခဈြကွောကျ ရိုသစှော နလောခဲ့သညျ။ ခုလညျး လငျတျောမောငျ့ ဆန်ဒအတိုငျး သားလေး ကြျောကြျောအား မိဘအိမျ ပို့ကာ အိမျပွနျလာပွီး ညပိုငျး လငျဖွဈသူ ဘီယာ သောကျစဉျ မွညျးရနျ အကွျော အလှျောမြား ကိုယျတိုငျ ခကျြပွုပျ နတေော့၏။ အိမျဖျေါ ဒျေါညှနျ့မှာ လစာ ကွိုထုတျ၍ မှေးရပျမွေ သို့ ခဏ ပွနျသှားသဖွငျ့ လငျမယား ၂ယောကျသာ ကနျြရှိရာ ကာမကိစ်စအတှကျ တနကေုနျ ရငျခုနျနမေိသညျ။ အားလုံး ပွငျဆငျ ပွီးသညျနှငျ့ ညနပေိုငျး ရမေိုးခြိုးကာ လငျဖွဈသူ အား မြှျောနတေော့၏။
ဦးနသေျော အိမျပွနျရောကျစဉျ အနကျရောငျ ကိုယျကပျြ အကငြ်္ီလေးနှငျ့ ထမိနျစကပျလေး ဝတျထားသော ဒျေါစန်ဒာကြျောအား ကွညျ့ကာ အားရကနြေပျ နမေိသညျ။ ခရီးထှကျခြိနျ ဖုနျးထဲ ရိုကျထားသော မယားဖွဈသူ၏ ဆကျစီကသြော ပုံလေးမြားအား ကွညျ့ ကာ ဂှငျးထုရသညျမှာ အကွိမျကွိမျပငျ။ တအိမျလုံး ၂ယောကျ ထဲသာ ရှိသညျဟုသော အသိနှငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ကော့ထှကျနေ သော ဖငျသားစိုငျမြား တငျးမောကျ နသေော နို့အုံမြားက အနီးကပျ မွငျရုံဖွငျ့ ဦးနသေျော မှာ စိတျကွှ နတေော့သညျ။ ဧညျ့ခနျးထဲမှ ထလာပွီး လငျဖွဈသူအား ဖကျနမျးရာ ဒျေါစန်ဒာကြျော ကိုယျသငျးနံ့က ဦးနသေျော အား ရငျခုနျစပွေနျ၏။ အသကျရှူလိုကျတိုငျး ကွှ တကျ လာသော နို့အုံမြားက ဦးနသေျော ရငျအုပျအား ဖိကပျ ထားသဖွငျ့ သှေးမြား ဆူပှကျ လာတော့သညျ။
” စန်ဒာရယျ … လှလိုကျတာကှာ “ ” ဟှနျ့ … တျောပါ … အပိုတှေ … ခရီးထှကျတိုငျး … စန်ဒာ့ ဘကျကပဲ ဖုနျးဆကျရတာ “ ” ဟာ … ကိုသျော က … အလုပျထဲရောကျရငျ … စိတျနှဈတတျ လို့ပါကှာ “ ” ကဲ … ရခြေိုး ကိုသျော … အမွညျး အဆငျသငျ့ လုပျပွီးသား … သောကျပွီး အိပျရမှာနျော … အပွငျ မထှကျရဘူး “ ” အငျးပါ … စန်ဒာရယျ “ လငျမယားနှဈယောကျ စကားပွောလိုကျ ဦးနေ သျောက သောကျလိုကျ ဒျေါစန်ဒာကြျောက အမွညျးခှံ့လိုကျနှငျ့ ငယျမူငယျသှေးမြား ပွနျကာ မိုးခြုပျမှ အိပျယာ ဝငျခဲ့ကွ၏။ ဒျေါစန်ဒာ ကြျောမှာ ညဝတျ အကငြ်္ီ အပါးလေးနှငျ့ တှဲလကျြ ဂါဝနျ အတိုလေး လဲကာ ကုတငျပျေါ ပကျလကျလှနျ လှဲခလြိုကျသညျ။ ဦးနသေျော မှာ မယားဖွဈသူ ကိုယျလုံး အိအိလေးအား ဖကျကာ နူတျခမျးအား အငမျးမရ ဆှဲစုပျ တော့၏။
” ပွှတျ … ပလပျ ပလပျ “ နူတျခမျးခငျြး တစေု့ပျရငျး ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ဖငျကွီးအား ပှတျသပျနသေညျ။ ဒျေါစန်ဒာကြျော ကလညျး ပုဆိုးပျေါမှ ဦးနသေျော ပေါငျကွားအား တုံ့ပွနျ ပှတျသပျလိုကျ၏။ ပေါငျကွားမှ လီးကွီး မာထငျလာရာ ပုဆိုးခါးပုံစ ဖွညျကာ လကျလြှို နိုကျရငျး လီးအား ခပျတငျးတငျးလေး ဆုပျကိုငျ ထားသညျ။ ” မာထငျနပွေီနျော … ကိုသျော “ ” အငျး … ဒီလို မနရေတာ ကွာပွီလေ … စန်ဒာကလညျး “ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ ကိုယျလုံး စောငျးကာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ အနထေားဖွငျ့ ဦးနသေျော နူတျခမျးအား ဆှဲ စုပျကာ လီးအား ကှငျးတိုကျ ပေးနသေညျ။ ဦးနသေျောကလညျး ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ဖငျသားစိုငျကွီးအား ပှတျသပျရငျး ညဝတျ ဂါဝနျ လေးအား ဆှဲတငျလိုကျ၏။
” အဝတျတှေ ခြှတျရအောငျ … စန်ဒာ “ ၂ယောကျသား အဝတျစားမြား ထခြှတျရာ ခန်ဓာကိုယျ ဗလာဖွဈသှားသော ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ကိုယျလုံးမှာ တကျမကျစရာပငျ။ ဦးနသေျောမှာ မယားဖွဈသူ နို့အုံအား ပှတျသပျကာ ပွနျလှဲခလြိုကျပွနျသညျ။ ဦးနသေျော လကျက မယားဖွဈသူ ပေါငျကွားကို ပှတျသပျနသေလို ဒျေါစန်ဒာကြျောကလညျး လငျတျောမောငျ့ လီးအား ဂှငျးတိုကျပေးနေ၏။ ဦးနသေျော လီးမှာ ပုံမှနျဆိုဒျပငျ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ လငျဖွဈသူ လီးကိုသာ အလိုးခံဖူးသဖွငျ့ အားရကနြေပျနမေိသညျ။ ခဏအကွာ ပကျလကျ လှနျပေးသော ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ပေါငျကွားထဲ ဒူးထောကျ နရောယူကာ အပျေါမှ ဖိလိုးတော့သညျ။
” ဗဈြ … အ … အ … ဇှိ အားးး … ဘှတျ ဘှတျ “ လီးအရငျးထိ ဝငျသှားသျောလညျး တဝကျခနျ့ အထုတျ အသှငျး လုပျကာ ဆီးခုံခွငျး ဖိကပျရငျး ကွိတျလိုးလိုကျ၏။ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ အောကျမှ လငျတျောမောငျ၏ ခါးအား ဆှဲကာ ဖငျကွီး ကော့ပေးထားသညျ။ ဆီးခုံး ခငျြး ကပျကာ ကွိတျလိုးနသေဖွငျ့ စောကျစိအား ပှတျတိုကျခံရပွီး ကာမ စညျးစိမျလေး ရရှိ နတေော့သညျ။ ” ဇှိ ဇှိ … အ … ဘှတျ ပွှတျ … ဖှပျဖှပျ “ ဆောငျ့လိုးလိုကျ ကွိတျလိုးလိုကျဖွငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ စောကျခေါငျးအတှငျးသားမြားက လီးအား ညှဈပေး နေ ပွနျ၏။ ” ဘှတျ … ဗဈြ …… ရှီးးးးး … အားဟား …… ကောငျးလိုကျတာ စန်ဒာရယျ “ ” အ အားးးး … လိုး လိုး …… ကိုသျော … နာနာ လေး ဆောငျ့လိုးပေး … အငျးဟငျး “ လီးသေးသျောလညျး ဦးနသေျော၏ ထိထိမိမိ ဆောငျ့ခကျြ မြားကွောငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျော တ ယောကျ အထှဋျထိပျ ရောကျသှားခြိနျ စောကျပတျ အတှငျးသား မြားက အလိုလြောကျ လီးအား ညှဈပေး ထားသညျ။ ဦးနသေျော လညျး မထိနျးနိုငျတော့ဘဲ လရညျမြား ပနျးထုတျ ပဈရ တော့၏။ ခဏအကွာ နှဈယောကျသား မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ဖကျရငျး အိပျပြျော သှားကွသညျ။ နောကျရကျ ညတှငျ လငျဖွဈသူ ဦးနသေျော၏ ငယျသူငယျခငျြး တယောကျ နိုငျငံခွားမှ မွနျမာပွညျ ပွနျလာရာ အိမျ တှငျ အတူ သောကျရာမှ မထငျမှတျသော အဖွဈပကျြမြား ဖွဈပကျြခဲ့ရတော့၏။
လငျဖွဈသူ ဦးနသေျောနှငျ့ ကြောငျးနဘေကျ သူငယျခငျြး ဦးမငျးနိုငျတို့ ရှေးဟောငျး နှောငျးဖွဈမြား ပွောကာ အရကျသောကျနကွေ ရငျး ည ၁၂ကြျောကြျော တှငျ အိပျခငျြလာသဖွငျ့ သူမတို့ လငျမယား အိပျခနျးထဲ ဝငျလာကာ အိပျပဈလိုကျ၏။ လငျတျောမောငျအား စောငျ့ရငျး အိပျယာပွငျထကျ လူးကာလိမျ့ကာဖွငျ့ အိပျမောကသြှားတော့သညျ။ ထမိနျလေးမှာ ပေါငျလယျထိ လှနျတကျနကော ကှေးကှေးလေး အိပျပြျောနစေဉျ အခနျးတံခါး ဖှငျ့သံနှငျ့အတူ ခွသေံကွားရသဖွငျ့ ဖကျြကနဲ့ နိုးလာခဲ့၏။ သို့သျော မကျြလုံးလေး မှိတျကာ အိပျခငျြ ယောငျ ဆောငျနခေဲ့သညျ။ ခဏအကွာ ကုတငျလှုပျသံနှငျ့ အတူ သူမ ထမိနျလေး ခါးထိ ဆှဲလှနျခံလိုကျရပွနျ၏။ ကှေးထားသော ဒျေါစန်ဒာကြေျာ့ ပေါငျတနျကွားမှ အမှေး ကောကျကောကျ လေးမြား ဖုံးအုပျထားသော စောကျဖုတျလေးက ပွူးပွီး ထှကျနသေညျ။ ခပျနှေးနှေး အသားစိုငျ တခုက စောကျဖုတျ အကျကှဲကွောငျးထဲ ပှတျဆှဲနရော ဖငျကွီး အား ကော့ပေးလိုကျ၏။ လ မှေးမြားက ဖငျ၂ခွမျး ကွားလေးအား ကွိတျပှတျနရော ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ရမ်မကျစိတျလေး ထကွှလာကာ အသံထှကျ တောငျးဆို လိုကျတော့သညျ။
” လုပျတော့ ကှာ…. ကိုသျောကလညျး … ဘာမှနျးလဲ မသိဘူး … ဟှနျ့ “ ခဏအကွာ သူမနောကျကြောဘကျမှ အဖုတျလေးအား ပှတျဆှဲနသေော လီးကွီးမှာ စောကျခေါငျးပေါကျထဲ တိုးဝငျ လာတော့၏။ ” အ … အား … ကြှတျ ကြှတျ “ ဒျေါစန်ဒာကြျော တ ယောကျ မကျြတောငျမြား မှေးစငျး သှားကာ နူတျခမျးလေး စိကာ အံကွိတျ ညညျးငွူမိသညျ။ ထူခွားသညျက လငျဖွဈသူ လီးမှာ ဒီည တုတျလာသလို ခံစားနရေ၏။ စောကျပတျ လေးထဲ လီးကွီး တိုးဝငျလာရာ ပွညျ့ကွပျနသေဖွငျ့ နူတျခမျးသားလေးမြား လိပျဝငျ သှားတော့သညျ။ ပုံမှနျလေး နောကျမှ လိုးနရော တခါတခါ အဖုတျထဲမှ လီးမှာ ကြှတျထှကျပွီး လီးထိပျက ဖငျပေါကျ လေး ထောကျမိနပွေနျ၏။ ဒျေါစန်ဒာကြျော ဖငျဝလေး လီးနှငျ့ ထောကျမိတိုငျး ခါးလေးတှနျ့ကာ ကွကျသီးမြား တဖွနျးဖွနျး ထလာရသညျ။ ၁၀ခကျြလောကျ ဆောငျ့လိုးလိုကျ ကွိတျလိုးလိုကျနှငျ့ လငျဖွဈသူ၏ လိုးခကျြမြားမှာ ခါတိုငျးနှငျ့ မတူ တမူထူးနပွေနျ၏။ ဆောငျ့ လိုးလိုကျတိုငျး အသဲခိုကျအောငျ ခံစားနရေ ပွနျသညျ။
” ဘှတျ …ဖှပျ … ဗဈြ ဗဈြ ဗဈြ … ဇှိ … ဖှပျ ဘှတျ “ ” အ … အား … ဖွညျးဖွညျး …ကိုသျောရယျ … နာတယျကှာ … အဟငျ့ ဟငျ့ “ ” ပကျလကျလှနျလိုကျပါ့လား … စန်ဒာ “ ” ဟငျ … ရှငျ ရှငျ … ကိုသျော … မဟုတျ ဟုတျ …… “ နောကျကြောဘကျမှ စကားသံ ကွောငျ့ လငျဖွဈသူ မဟုတျမှနျး ရိပျမိလိုကျတော့သညျ။ ခကျြခငျြး ဒူးကှေး လကျြ အနထေားမှ ကိုယျလုံးလှညျ့ ကွညျ့လိုကျရာ အောကျပိုငျး ဗလာဖွငျ့ သူမနောကျကြောဘကျမှ ဘေးတစောငျးလှဲကာ လိုးနသေော လငျဖွဈသူ၏ ငယျသူငယျခငျြး ဦးမငျးနိုငျ အား တှလေို့ကျရ၏။ ကွောငျကွညျ့နစေဉျ ဦးမငျးနိုငျမှာ သူမအား ပကျလကျ လှနျကာ အပျေါမှ ခှထားလိုကျပွနျသညျ။ ” အဟငျ့ ဟငျ့ … မလုပျပါနဲ့ … ကိုမငျးနိုငျရယျ … ဆငျးပါ … ကမြ ယောကငြ်္ား သိသှားရငျ မကောငျးပါဘူး “ ” နသေျော… မူးပွီး အိပျသှားပါပွီ … စိုးရိမျ မနပေါနဲ့ … စန်ဒာရယျ … ငါ နငျ့ကို … မွငျမွငျခငျြး လိုးခငျြနတောဟ “ ” အိုရျ … ကမြက … ရှငျ့ သူငယျခငျြး မိနျးမလေ … အ ဟငျ့ ဟငျ့ “ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ သူမပေါငျပျေါ ဖိထိုငျထားသော ဦးမငျးနိုငျ ရငျဘတျအား တှနျးခနြရော အားမမြှသဖွငျ့ အရာမရောကျ ခဲ့ပေ။ ဦးမငျးနိုငျမှာ ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ လကျနှဈဖကျအား ညာလကျဖွငျ့ ဖမျးခြုပျကာ ဘယျလကျ က လီးအား အောကျနိမျ့ခရြငျး စောကျဖုတျထဲ ဖိသှငျး ပဈပွနျသညျ။ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ လီးကွီး အဖုတျ အကျကှဲ ကွောငျးထဲ ရောကျသညျနှငျ့ ပေါငျနှဈခွမျးအား စိ ပဈရာ အပျေါမှ ခှထိုငျထားသော ဦးမငျးနိုငျ၏ ခန်ဓာကိုယျ အလေးခြိနျ ကွောငျ့ စိမရတော့ပေ။
” ပေါငျဖွဲထားလေ … စန်ဒာရဲ့ … စိထားတော့ စောကျပတျနှုတျခမျးသာတှေ … ပှနျးပဲ့ကုနျမယျ “ ” အိုရျ … မလုပျပါနဲ့တော့ … မ သငျ့တျောပါဘူး “ နှဈဦး လသေံမှာ ခပျတိုးတိုး ကွိတျပွောနရော ခဏအကွာ ဒျေါစန်ဒာကြျော စောကျပတျလေးမှာ ရုနျးကနျရငျး လီး ထိပျ ဖွငျ့ ပှတျမိနရော သဘာဝ အတိုငျး စောကျရညျကွညျမြား အိုငျထှကျ လာတော့သညျ။ ဦးမငျးနိုငျ လီးထိပျမှာ စောကျခေါငျးဝ လေး ထောကျမိခြိနျ ဗဈြကနဲ့ လီးတဝကျခနျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ အဖုတျလေးထဲ တိုးဝငျသှား၏။ ” ခုန … လိုးပွီးသားလေ … စန်ဒာ … ရုနျးမနပေါနဲ့ “ ” အဟငျ့ ဟငျ့ … ကမြ ယောကငြ်္ားမှတျလို့ ပေါ့ … ထုတျ ထုတျ … ရှငျ့ဟာကွီး ထုတျပါရှငျ … နာလို့ပါ “ ဦးမငျး နိုငျမှာ ဒျေါစန်ဒာကြေျာ့၏ လကျနှဈဖကျအား လှတျ မပေးသေးပဲ ခါးအားဖွငျ့ အပျေါမှ တခကျြခငျြး ခှလိုး နသေညျ။ ကလေးတ ယောကျ အမေ ဖွဈသျောလညျး တုတျခိုငျထှားကွိုငျးသော ဦးမငျးနိုငျ လီးကွီးအတှကျ စောကျခေါငျးပေါကျလေးမှာ ကဉျြးနပွေနျ၏။ လီးကွီး ပွနျထုတျတိုငျး စောကျပတျ အတှငျး နှုတျခမျး သားလေး မြား ဒဈဖွငျ့ ခြိတျပါ လာကာ စောကျပတျလေး ရဲခနဲ ရဲခနဲ ပွဲလနျ သှားတော့သညျ။ ပွနျဖိလိုးခြိနျ အဖုတျ နူတျခမျး သားမြား လီးအရညျပွားဘေး လိပျဝငျသှားရာ ဦးမငျးနိုငျမှာ တရှီးရှီး စုပျသပျရငျး စောကျဖုတျ အရသာ တှနေ့မေိ၏။
” အားးးးး အငျ့ … အငျ့ … ထှကျကုနျပွီ … အမလေးးးး “ ဒျေါစန်ဒာကြျောတယောကျ ငွငျးဆနျရငျး စောကျခေါငျး အတှငျးသားထဲ ပှတျတိုကျ ခြိတျဆှဲနသေော ဦးမငျးနိုငျ လီးကွီး၏ အထိတှအေ့ောကျ ဝပျဆငျး သှားရသညျ။ စိတျဆိုးသညျ့ ဟနျလေးဖွငျ့ ဖငျကွီး ကော့ကာ ဆီးခုံးခငျြး ထိအောငျ ပငျ့ဆောငျ့ပေးရငျး စောကျရညျ မြား ထောငျပနျး နတေော့၏။ ဦးမငျးနိုငျမှာ လီးအား ဆှဲထုတျကာ ခါးကော့ ပနျးနသေော ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ စောကျပတျအုံလေးအား လီးထိပျဖွငျ့ တဘတျဘတျ ရိုကျခနြပွေနျသညျ။ ဒျေါစန်ဒာကြျော တ ယောကျ စောကျရညျပနျးထုတျနစေဉျ ဦးမငျးနိုငျ၏ လီးဖွငျ့ ရိုကျခကျြမြားက စောကျစိလေးပျေါ ကရြောကျလာကာ အသဲခိုကျအောငျ ခံစား နရေတော့၏။ ထိုစဉျ ဦးမငျးနိုငျမှာ ကော့တကျနသေော ခါးလေးအား စုံကိုငျပွီး ဒူးထောကျလကျြ အနထေားနှငျ့ပငျ မီးပှငျ့မတတျ ဆှဲလိုးလိုကျပွနျသညျ။
” ရှီးးးးးးး … အားးးး အားးးးး … အမလေးးးး … သပှေီ သပှေီ … အ အားးးးးးး “ အားပါသော လိုးခကျြမြားက သားအိမျဝထိ ဒုတျကနဲ့ ဒုတျကနဲ့ လာဆောငျ့မိသဖွငျ့ ငယျသံပါအောငျ အျောမိလိုကျ၏။ အျောလိုကျသံက ဦးမငျးနိုငျပငျ လနျ့သှား ရကာ လိုးခကျြမြား လြော့ခြ ပဈလိုကျ ရတော့သညျ။။ ဦးမငျးနိုငျ၏ လိုးခကျြမြားက လီးအရငျးထိ ဝငျသှားရုံမကာ လဥနှဈလုံးက တဘတျဘတျဖွငျ့ ဖငျ ဝလေးပါ ရိုကျမိကာ လိုးအား ပွငျးထနျလှနျးလှ၏။ ဒျေါစန်ဒာကြျောသာ မက လငျဖွဈသူနှငျ့ အကွိမျကွိမျ လိုးခဲ့သော ကုတငျလေးပါ ဦးမငျးနိုငျ လိုးခကျြမြားအောကျ လှုပျခါနရေသညျ။ ဒျေါစန်ဒာကြျော စောကျရညျမြား ကုနျစငျသှားခြိနျ ပေါငျနှဈဖကျမှာ ဦးမငျးနိုငျ ပုခုံး ပျေါ ရောကျရှိနေ၏။ပေါငျနှဈခြောငျး ဒူးထောကျ ထမျးလကျြ အနထေားနှငျ့ အံကွိတျလိုးရာ စောကျဖုတျလေးအား ဖွဲပေးသလို ဖွဈ ရာ လီးအဝငျအထှကျ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ၂ဦးစလုံး မွငျနရေသညျ။
” အားးးး … အငျ့ … ဘှတျ ဘှတျ … အား … အားးးး “ ဦးမငျးနိုငျမှာ မနားတမျးဆှဲလိုးရငျး လီးတနျတလြှောကျ ကငျြတကျလာသဖွငျ့ ပေါကျနှဈဖကျ အောကျပွနျခကြာ နို့အုံနှဈဖကျအား ကုနျးစို့ရငျး လရညျမြား ပနျးထုတျပွီး ဇပျငပျဇပျငငျဖွငျ့ တဖွညျးဖွညျး ငွိမျသကျ သှားတော့၏။ ဒျေါစန်ဒာကြျော လကျမြားကလညျး အလိုလြောကျ ဦးမငျးနိုငျ ကြောပွငျအား ခပျတငျးတငျး ဖကျတှယျထား လိုကျ မိသညျ။ ဒျေါစန်ဒာကြျော သတိမထားမိလိုကျသညျမှာ အဖွဈပကျြမြားအား ဦးမငျးနိုငျမှ ဖုနျးဖွငျ့ ရိုကျယူ ထားခွငျးပငျ။ နောကျရကျ မြားတှငျ အကွပျကိုငျကာ အမြိုးမြိုး နှိပျစကျပွီး လိုးတော့၏။
” စန်ဒာ … ကိုသျော ရောကျနတော ကွာပွီ … ဘာတှေ တှေးနတောလဲ “ ” ဟငျ … ကိုသျော … ဟို ဟို … ကိုမငျးနိုငျရော မပါဘူးလား “ ” မငျးနိုငျက … ဒီည မိုးခြုပျမှာ စန်ဒာရဲ့ … တခွား သူငယျခငျြးတှေ … သှားတှနေ့တော … ဘီယာ လုပျကှာ … ဒီညတော့ ကိုသျော တယောကျထဲ … အမူး သောကျရတော့မှာ … ပွီးမှ … ဟောဒီက မယားခြော လေးနဲ့ … ခိခိ “ ” အိုရျ … ကိုသျော နျော … သှား … ဟှ နျ့ “ လငျတျောမောငျ အတှကျ အမွညျးမြား ကွျောလှျောရငျး သကျပွငျးရှညျကွီး ခမြိလိုကျသညျ။ ၅ရကျလောကျ ရှိနသေညျ လငျ ဖွဈသူ ဘီယာသောကျတိုငျး ၄လုံးလောကျ ကြျောကြျောတှငျ ဦးမငျးနိုငျ ပေးထားသော အိပျဆေး အစကျကလေး ခပျကာ ဘီယာ ငှဲ့ ပေးလိုကျသညျ။ ထို ဘီယာခှကျ ကုနျသညျနှငျ့ လငျတျောမောငျ ဦးနသေျောမှာ အိပျပြျောသှားပွီး မနကျ ၉နာရီလောကျမှ နိုးလာလေ့ ရှိ၏။ ခုလညျး ဦးမငျးနိုငျမှာ မနကျက တခါ လိုးပွီး ညပိုငျး ထပျလိုးရနျ အိပျဆေး ခပျခိုငျးထားပွနျသညျ။
ည ၁၀နာရီ လောကျ ဦးနသေျော ဘီယာ သောကျရငျး အိပျဆေး အရှိနျဖွငျ့ တခူးခူး ဟောကျကာ ဧညျခနျးထဲတှငျ အိပျပြျောသှား တော့၏။ ခငျပှနျးဖွဈသူ ကိုယျလုံးအား မနိုငျတနိုငျ မကာ အိပျခနျးထဲ တှဲပို့ထားလိုကျရသညျ။ ဒျေါစန်ဒာကြျော တယောကျ လငျဖွဈသူ အား အိပျခနျးထဲ ပို့ရငျး ခဏလှဲနရော အိပျခနျးပွငျမှ အခကျြပေးသံ ကွားရသညျနှငျ့ ခကျြခငျြး လှဲနရောမှ ထကာ အိပျခနျးထဲမှ ထှကျ လာခဲ့၏။ အခနျးတခနျးကြျောမှ အိပျခနျးလေး မီးလငျးနကော တံခါး ဟထားသဖွငျ့ တှနျးဝငျရငျး တံခါး ပွနျစိထားလိုကျတော့သညျ။ အခနျးထဲ ရောကျသညျနှငျ့ ကုတငျ၏ တောငျဘကျ ကြှနျးထိုငျခုံပျေါ ထိုငျကာ သူမအား စိုကျကွညျ့နသေော ဦးမငျးနိုငျအား တှလေို့ကျ ရ၏။
” နသေျော … အိပျသှားပွီ မလား “ ” ဟုတျ “ ” လာစမျး … ဒီနား … ထမိနျ ခြှတျစမျး “ ဦးမငျးနိုငျ လှမျးပွောရာ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ ထမိနျခြှတျခရြငျး မတျတပျရပျလကျြ အနထေားဖွငျ့ ရှတေ့ညျတညျ့ ရပျနလေိုကျသညျ။ ပေါကျတနျ တုတျတုတျ ဖှေးဖှေး ကွားမှာ စောကျမှေးအုံကွီး မွငျသညျနှငျ့ ဦးမငျးနိုငျ မကျြနှာတခကျြ ပကျြသှားတော့၏။ ” တောကျ “ ” အငျ့ … အ …… အငျ့ … အမလေး … နာလိုကျတာ တျောပါတော့ … ကိုမငျးနိုငျရယျ … အဟငျ့ ဟငျ့ “ ” နောကျတခါ … ငါ ခိုငျးတဲ့အတိုငျး လုပျမှာလား … ပွောစမျး “ ” လုပျပါမယျ … ရှငျ “ ဦးမငျးနိုငျမှာ သူ့ရှေ့ ရပျနသေော ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ပေါငျဂှမှ စောကျမှေးအုံအား လကျဖွငျ့ တဗွဈဗွဈ ဆှဲနူတျ ပဈနေ၏။ မနကေ့ စောကျမှေးရိတျခိုငျးထားရာ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ မနကျပိုငျး ဦးမငျးနိုငျ အလိုးခံပွီးသညျနှငျ့ နလေ့ညျပိုငျး လငျဖွဈသူ ဦးနသေျောအား ထပျမံ အလိုးခံခဲ့သဖွငျ့ ညနစေောငျးထိ အိပျပြျော သှားခဲ့၏။ အိပျယာ နိုးလာစဉျ ရခြေိုးကာ ဧညျ့ခနျးထဲ ခဏထိုငျ စဉျ လငျတျောမောငျ ဦးနသေျော အပွငျမှ ပွနျရောကျ လာသဖွငျ့ အမွညျးမြား လုပျပေးရကာ အမှေး ရိတျခိုငျးသညျ့ ကိစ်စအား မလြေ့ော့သှားတော့သညျ။
” နောကျတခါ … ငါခိုငျးတဲ့ အတိုငျး မလုပျရငျ … ဒီ့ထကျ နာမယျ … အကငြ်္ီပါ ခြှတျစမျး “ ” ဟုတျ … အဟငျ့ ဟငျ့ “ ဦးမငျးနိုငျမှာ ထိုငျခုံပျေါ ထိုငျရငျး ဘောငျးဘီ ဇဈဖှငျ့ကာ လီးအား ဆှဲထုတျလိုကျ၏။ ” လာစမျး ငါ့ရှေ့ … ထိုငျပွီး ပါးစပျဟထား “ ဒျေါစန်ဒာကြျော ကိုယျလုံးတီး အနထေားဖွငျ့ ဦးမငျးနိုငျ ပေါငျကွား ဒူးတုတျထိုငျကာ နူတျခမျးလေး ဟထားပေး၏။ ” ပါးစပျကို … ရသလောကျဟ … ငါ့လီးထိပျနား တညျ့တညျ့လေးထား “ ဦးမငျးနိုငျမှာ သူ့ပေါငျကွားရှေ့ ထိုငျနသေော ဒျေါစန်ဒာကြျော အား စိုကျကွညျ့ကာ အမိနျ့ ဆနျဆနျ ပွောဆိုနပွေနျသညျ။ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ မလှနျဆနျရဲဘဲ ကွမျးပွငျပျေါ ဒူးတုတျ လကျြ အနထေားဖွငျ့ လီးထိပျနား ပါးစပျဟ ထား ပေး၏။ ဦးမငျးနိုငျမှာ ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ အပွုမူကွောငျ့ ကနြေပျ အားရ နကော လီးထိပျ တညျ့တညျ့ ဟနသေော ပါးစပျလေးထဲ ဒဈဖူး တကေ့ာ ဖငျရှုံ့ပွီး သေးမြား ညှဈထုတျလိုကျသညျ။ လီးထိပျ အပေါကျလေးမှ ငံကြိကြိ သေးရညျမြားက ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ အာခေါငျထဲထိ အရှိနျ ပွငျးပွငျး နှငျ့ ပနျးထှကျသှားတော့၏။
” ဝု … ဖလူးးး … အဟှတျ ဟှတျ ဟှတျ “ ငံကြိကြိ အရသာနှငျ့ သေးရညျမြား အဆကျမပွတျ ဝငျရောကျလာသဖွငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျော တယောကျ တဟှတျဟှတျဖွငျ့ သီးကာ ခြောငျးဆိုး နပွေနျသညျ။ ဦးမငျးနိုငျမှာ သေးပနျးရငျး ခဏရပျကာ ဒျေါစန်ဒာခြို၏ နို့သီးခေါငျး ၂ဖကျအား လကျဖွငျ့ လိမျဆှဲပဈတော့၏။ ” ငါ့သေးကို … ရှံတယျပေါ့ … ဟုတျလား … ဟမျ “ ” အမလေး … နာလိုကျတာ … မဟုတျပါဘူး … မြိုခရြငျး … သီးသှားလို့ပါ ကိုမငျးနိုငျရယျ … အားးး အားးး … အဟငျ့ ဟငျ့ ဟငျ့ “ ဦးမငျးနိုငျမှာ နို့သီးခေါငျး ၂ဖကျ အား လကျဖွငျ့ ညှဈခြေ လိမျဆှဲလိုကျသဖွငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျော တယောကျ မကျြရညျ မြား ဝိုငျးလာတော့သညျ။ ” နောကျတဈခါ … ငါ သေးပေါကျထညျ့ရငျ … အသကျအောငျ့ပွီး မြိုခြ … မသီးစနေဲ့ … အငျ့အငျ့ “ ” ဟုတျ … အမလေးးး အ အ …… သပေါပွီ … တျောပါ တော့ရှငျ … နာလို့ပါ “ ” ပါးစပျ ပွနျဟ … သေးက ကနျြသေးတယျ မပွီးသေးဘူး “
ဦးမငျးနိုငျ စကားဆုံးသညျနှငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ လီးထိပျတညျ့တညျ့ ကပြာကယာ ပါးစပျလေးဟ ပေးထားလိုကျ၏။ ဒီတကွိမျ ဦးမငျးနိုငျမှာ အောကျ နူတျခမျး ပျေါ ဒဈဖူး မေးတငျကာ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပေါကျထညျ့လိုကျတော့သညျ။ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ သိမျငယျ စိတျဝငျနရောမှ လီး အရညျပွားနှငျ့ မကျြနှာတဝိုကျ ပှတျသပျပေးစဉျ ခံစားမှု့ ပွောငျးလာကာ ရမ်မကျသှေးမြား ဆူကွှ လာရသညျ။ ဦးမငျးနိုငျ ပေါငျကွားမှ လီးမှာ သူမ မကျြနှာရှေ့ ဆတျခနဲ ဆတျခနဲ ထောငျမတျနေ၏။ ဖွူဖှေး တုတျခိုငျသော သူမ ပေါငျတနျနှဈဖကျ ကွား ဆီးခုံးလေးထကျ နကျမှောငျ တှနျ့လိပျနသေော စောကျမှေးအုံကွီးအောကျ စောကျပတျ အုံမှာ တဆဈဆဈဖွငျ့ ဖေါငျးကွှနေ ပွနျသညျ။ ဦးမငျးနိုငျ လကျတဖကျမှာ လီးအရညျပွားအား စုလိုကျဖွဲလိုကျ ပှတျသပျနရော ဒဈကွီး ကားထှကျလာတိုငျး အနီးကပျ မွငျကှငျးကွောငျ့ ရမ်မကျခိုးမြား ဟုနျးခနဲ တောငျလောငျ လာ၏။ အသားမြား တဆကျဆကျ တုနျလာကာ တဈကိုယျလုံး ကွကျသီး ထ နပွေနျသညျ။
” ထရပျပွီး … ဟိုဖကျလှညျ့ … ဖငျကုနျးစမျး “ ထူးထူးခွားခွား ဦးမငျးနိုငျ ခိုငျးသမြှ လုပျပေး နရေသညျကို စိတျထဲ အားရကနြေပျ သလို ခံစားလာရ၏။ ဦးမငျးနိုငျအား ကြောပေးကာ မတျတပျရပျလကျြ အနထေားဖွငျ့ ဒူးကှေးကာ လကျထောကျထားရငျး ဖငျကွီး နောကျပဈ ထားလိုကျပွနျသညျ။ ဦးမငျးနိုငျမှာလညျး သူငယျခငျြး ဖွဈသူ၏ မယားခြောလေး ဖငျကွားမှ ပွူးထှကျ နသေော စောကျ ဖုတျကွောငျ့ ကာမစိတျမြား ထကွှနေ၏။ ဦးမငျးနိုငျမှ ခုံပျေါထိုငျနရောမှ ဆကျကနဲ့ ထရပျပွီး ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ခါးလေးအား စုံကိုငျ လိုကျသညျ။ ဖေါငျးကွှ နသေော စောကျပတျအုံအား လီးထိပျ လာတေ့ သညျနှငျ့ မကျြလုံးလေးမိတျကာ လီးအဝငျ စောငျ့နေ လိုကျ၏။
” ဗဈြ … အားးးး “ ရုတျတရကျ ပဈဆောငျ့လိုကျတဲ့ လီးကွီးကွောငျ့ ခေါငျးမော့ သှားပွီး ဖငျကွီးကော့တကျသှားပွနျသညျ။ မနားတမျး ဆောငျ့ခကျြမြားအောကျ ဖငျသားစိုငျမြား တုနျခါနရော ဦးမငျနိုငျ အဖို့ လိုးမဝ နိုငျအောငျ ဖွဈနေ ရှာ၏။ ” ဘှတျ ဘှတျ … ဖှပျ … ဗဈြ …… အ …… ဆောငျ့ဆောငျ့ … မရပျနဲ့ “ ဒျေါစန်ဒာကြျော မထိနျးနိုငျတော့ပဲ ပါးစပျမှ ဖှငျ့၍ တောငျးဆို နရေပွနျသညျ။ ဆောငျ့ခကျြမြား မွနျလာကာ စောကျပတျ ထဲ လီးဝငျလီးထှကျ သံမြား ဆူညံလာ၏။ ဦးမငျးနိုငျ လီးကွီး စောကျခေါငျးထဲ တဒုတျဒုတျ နှငျ့ သှေးတိုး လာသဖွငျ့ ပွီးတော့မညျမှနျး ခံစားသိရှိနသေညျ။လီးကွီးအား စောကျခေါငျး အတှငျးသားမြားနှငျ့ ညှဈကာ ဖငျကွီး ဝိုကျ ပေးနစေဉျ ဦးမငျးနိုငျ လကျနှဈဖကျမှာ ခါးကိုငျ ထားရာမှ တငျးမောကျနသေော နို့အုံအား ပွောငျးကိုငျကာ အားရှိသလောကျ ဆှဲလိုး နတေော့၏။
” ဖှပျဖှပျ … အ … ကောငျးလိုကျတာ … ဘှတျ ဘှတျ … အားဟား … ရှီးးးးးးးးးး … ပွှတျ … ပွှတျစှပျ … ဒုတျ အ အားးးးးး “ ဒျေါ စန်ဒာကြျော တယောကျ တအားအား ညညျးရငျး ဖငျကွီး ရသလောကျ နောကျပဈ ကော့ထား ပေးလိုကျသညျ။ စောကျခေါငျးထဲ ပူကနဲ့ ခံစားလိုကျရပွီး လီးအား ဆှဲထုတျ သှားခြိနျ လရညျမြားနှငျ့ စောကျရညျမြား ပေါငျးပွီး ပှကျကနဲ့ အနျထှကျလာတော့၏။ ပေါငျခွံ ထဲ အဖုတျမှ ထှကျကသြော အရညျမြားအား ဦးမငျးနိုငျမှာ လကျခြောငျးဖွငျ့ သပျယူရငျး ပါးစပျနား ကပျပေးရာ ဒျေါစန်ဒာကြျော တ ယောကျ မကျမကျ မောမော စုပျယူ မြိုခမြိနသေညျ။ အခနျးထဲ ရခေဲ သတ်ေတာ ထဲမှ အအေးဗူး တဈဗူးစီ ထုတျသောကျရငျး အမော ဖွေ လိုကျကွ၏။
တဖွညျးဖွညျး ဦးမငျးနိုငျ ပွနျရမညျ့ရကျက နီးကပျလာခဲ့သညျ။ လငျဖွဈသူ ဦးနသေျောနှငျ့ ပတျစပို့ ကိစ်စမြားလုပျကာ နိုငျငံခွား ပွနျ မညျ့ နောကျဆုံးည ရောကျရှိလာ၏။ ထုံးစံအတိုငျး စားကွသောကျကွဖွငျ့ အမှောငျထု ကွီးဆိုးလာရာ ညနကျလာတော့သညျ။ ထူး ထူးခွားခွား လငျတျောမောငျအား အိပျဆေး မခတျခိုငျးသဖွငျ့ ဘေးမှ အမွညျး ပွငျဆငျပေးရငျး အခွနေေ စောငျ့ကွညျ့နရေပွနျ၏။ ” မငျး … ဒီတခါ ပွနျရငျ … အပွီး ပွနျလာကှာ … မငျးနိုငျ “ ” အေးပါ … နသေျောရာ … ငါလညျး မွနျမာပွညျမှာပဲ … အခွခေတြော့ မှာပါ … ဟိုက ရှယျယာ တှေ အကုနျ ရောငျးထုတျပွီးတာနဲ့ … ပွနျလာခဲ့မယျ “ လငျဖွဈသူ ဦးနသေျောနှငျ့ စကားပွောရငျး ဦးမငျး နိုငျ ခွထေောကျ တဖကျမှ စားပှဲခုံအောကျမှ ဆနျ့ထှကျလာပွီး ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ပေါငျကွားထဲ ရောကျရှိလာသညျ။ ကိုယျလုံးလေး ဆကျကနဲ့ တုနျကာ လှမျးကွညျ့စဉျ ဦးမငျးနိုငျမှာ ခပျတညျတညျဖွငျ့ ဦးနသေျောအား စကားပွောနေ၏။ စားပှဲခုံ၏ တောငျဖကျတှငျ ဦးမငျးနိုငျ ထိုငျနပွေီး မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ခုံ၂လုံးတှငျ ဒျေါစန်ဒာကြျောနှငျ့ ဦးနသေျော ထိုငျနကွေသညျ။ ဦးမငျးနိုငျနှငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျော မှာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ အနထေားမို့ ခွဆေနျ့ထုတျရာ ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ပေါငျကွားတညျ့တညျ့ ထောကျမိ တော့၏။
ခွမေထိပျလေးမှာ ထမိနျအပွငျမှ ပေါငျဂှထဲ ထိုးကလျောနသေဖွငျ့ စောကျပတျအုံ ထိပျရှိ အစိလေးအား ထိမိစဉျ ဒျေါစန်ဒာကြေျာ့ ကိုယျလုံးလေး တုနျတကျ သှားသညျ။ လငျဖွဈသူ ဘေးထားပွီး သူစိမျး ယောကငြ်္ား တယောကျက ခွမေလေးဖွငျ့ အဖုတျအား ကလိ ပေးနေ သဖွငျ့ စိတျထဲ တရှိနျးရှိနျးလေးနှငျ့ လငျတျောမောငျ ဦးနသေျောအား ခိုးကွညျ့ရငျး ခွမေလေးအား ပေါငျနှငျ့ ညှပျထား လိုကျပွနျ၏။ တဖွညျးဖွညျး ဦးနသေျော စကားမြားမှာ အာလေး လြှာလေး ဖွဈလာကာ မူမမှနျ တော့ပေ။ သူငယျခငျြး ဖွဈသူနှငျ့ ခှဲခှာတော့မညျ့ ညမို့ အတိုငျးဆ မရှိ သောကျမိနသေညျ။ ခဏအကွာ ဦးနသေျော တယောကျ စားပှဲခုံပျေါ ခေါငျးစိုကျ သှားတော့၏။
ဦးနသေျော မှောကျသှား သညျနှငျ့ ဦးမငျးနိုငျ မှာ ထရပျရငျး ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ဘေးနား လြှောကျလာကာ ဘောငျးဘီ ဇဈဖှငျ့လိုကျ သညျ။ မတျတပျ ရပျလကျြ အနထေားဖွငျ့ လီးအား ထုတျကာ ဒျေါစန်ဒာကြျော ခေါငျးအား ဆှဲလှညျ့ရငျး ပါးစပျနား လီးထိပျ တပေ့ေး နေ၏။ ” ဟငျ … ကိုမငျးနိုငျ … ဟို ဟို … “ စကားပွောရငျး လငျတျောမောငျ ကွားသှားမညျ စိုးသဖွငျ့ ပါးစပျလေး လကျနှငျ့ ပိတျကာ ဦးမငျးနိုငျအား မကျြရိပျ မကျြကဲ ပွနသေညျ။ ” မပူပါနဲ့ … ခုန နသေေျာ့ ဘီယာခှကျထဲ … ငါ … အရကျတှေ … ရောထညျ့ ထားလိုကျပါတယျ “ ” အု … ပလှပျ … ပွှတျ ပွှတျ …… ဝူးးး အု “ ဦးမငျးနိုငျမှာ ပွောလညျးပွော ပါးစပျအား ဖိလိုးနသေညျ။ လိငျ နှငျ့ ပကျသကျပွီး အထကျစီးမှ ဆကျဆံခံလိုကျရတိုငျး သိမျငယျစိတျလေး ဝငျရောကျလာပွနျ၏။ သို့သျော လငျဖွဈသူ၏ အပွုစု အ ယုယနှငျ မတူပဲ ကွမျးကွမျး တမျးတမျး ပွောဆို ဆကျဆံခြိနျခဏ ထူးဆနျးစှာ သာယာ နမေိပွနျသညျ။
” ကောငျးတယျမလား … ပါးစပျကို လီးနဲ့ … လိုးပေးတာ “ ဦးမငျးနိုငျမှာ ယုတျမာ ရိုငျးစိုငျးသော စကားမြားပွောကာ လီးအားထုတျ ကာ ပါးပွငျနှငျ့ ပါးစပျအား လီးတနျဖွငျ့ တဘတျဘတျ ရိုကျပေးနေ၏။ ” ကွိုကျလား … ဖွစေမျး … စန်ဒာ “ မေးလညျးမေး ပါးစပျ ထဲ လီးပွနျထညျ့ကာ အရငျးထိ ဆောငျ့လိုးလိုကျပွနျသညျ။ ” အု … ဖလု … ဝေါ …… အငျး ကွိုကျတယျ “ လီးပွနျအထုတျ အသကျ လုရှုကာ ပွနျဖွလေိုကျရ၏။ ” ခဏနေ … စန်ဒာ့ … လိုးမယျ့ လီးကွီး … အားရအောငျ စုပျထားစမျး … ရော့ အငျ့ “ လြှာရဲ့ အထိအတှနှေ့ငျ့ အာခေါငျပြော့လေး ပှတျတိုကျ မှု့ကွောငျ့ လီးကွီးက တောငျမတျပွီး မာထငျလာရာ ဦးမငျးနိုငျမှာ လညျပငျကွော တှေ ထောငျလာပွီး ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ နူတျခမျးဒေါငျ့မှ အကြိအခြှဲတှေ ထှကျလာမှ လီးကွီးကို ဆှဲထုတျပေးလိုကျ တော့၏။
ပွောငျလကျနတေဲ့ လီးကွီးက သူမ မကျြနှာရှေ့ ရမျးခါနသေညျ။ လငျဖွဈသူ အမွတျတနိုး နမျးရှိုကျနသေော နူတျခမျးလေးအား လီး နှငျ့ အလိုး ခံလိုကျရတိုငျး စိတျထဲ ဝမျးနညျးသလိုလို ကနြေပျ သလိုလိုနှငျ့ ခံစားမှု့က ရှုပျထှေးနေ၏။ ” ကောငျးလိုကျတာ … စန်ဒာရာ … နသေျော ခုနေ နိုးလာပွီး … မွငျရငျ … ဘယျလို နမေလညျး မသိဘူး “ ဦးမငျးနိုငျ မှာ ပွောပွီးသညျနှငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ခုံ အား ဆှဲလှညျ့ကာ ပေါငျကွား ဒူးထောကျ ခါးညှတျရငျး ပေါငျတနျနှဈဖကျအား ဆှဲဖွဲလိုကျ၏။ ” အာ “ ဒျေါစန်ဒာကြျော တယောကျ လငျဖွဈသူ ဘေးထာပွီး သူစိမျးယောကငြ်္ားမှ သူမစောကျပတျလေးအား ဖွဲကွညျ့နသေဖွငျ့ မကျြနှာပူကာ ခေါငျးလေး ဘေးလှဲ ထားလိုကျပွနျသညျ။ လငျတျောမောငျ နိုးလာမလားဟု တှေးကာ စိတျထဲ တရှိနျးရှိနျးလေး ဖွဈနရေ၏။ ရုတျတရကျ အဖုတျလေးပျေါ ဦးမငျးနိုငျ လြှာဖြားလေး ထိကပျလာသဖွငျ့ အတှေးစ ပကျြကာ ခုံပျေါ ထိုငျလကျြအနထေားနှငျ့ အောကျဖကျ ငုံ့ကွညျ့မိသညျ။ ဦးမငျးနိုငျမှာ စောကျခေါငျးပေါကျလေးမှ စ၍ အစိလေးပျေါထိ လြှာအပွားလိုကျ ပငျ့ယကျပေးသဖွငျ့ ဖငျကွီး အလိုလို ကွှတကျ သှားရပွနျ၏။ လငျတျောမောငျ ဦးနသေျော ခဏတိုငျး ယကျပေးသျောလညျး ခံစားမှု့က ဒီလောကျ မကွှခဲ့ပေ သူမကိုယျသူမ အံအော နသေညျ။
စောကျစိ လေးမှာ ပွူးထှကျလာပွီး စောကျရမြေား အိုငျလာကာ ဖငျကွားထဲထိ စီးကလြာတော့၏။ အဖုတျဘေး နူတျခမျးသား နှဈ ဖကျ ဖေါငျးကွှလာရငျး အလိုလြောကျ ပေါငျတနျလေး ထပျဖွဲကာ ခါးကော့ ပေးနပွေနျသညျ။ ထိုစဉျ ဦးမငျးနိုငျမှာ စောကျပတျ နူတျ ခမျးသား နှဈဖကျအား ဘယျလကျဖွငျ့ ဖွဲကာ ညဘကျ လကျခလယျဖွငျ့ အထကျအောကျ ဖိဆှဲပေးလိုကျ၏။ ” အ …… ရှီးးးးးးးးး …… အဟငျ့ ဟငျ့ “ စောကျပတျ အတှငျးနှုတျခမျးသားကလေးမြားအား လကျခြောငျးထိပျဖွငျ့ ဖိပှတျရငျး အကျကှဲကွောငျး ထိပျနား မှ အစိလေး ထိုးကလျောပေးရာ ဒျေါစန်ဒာကြျော တယောကျ အကွောထဲ တဖငျြးဖငျြးနှငျ့ အရသာ ထူးနရေသညျ။ လကျခြောငျးလေး အား အဖုတျထဲ ထိုးမှရေငျး အကျကှဲကွောငျးအတိုငျး အထကျအောကျ ပှတျဆှဲပေးရာ အရညျကွညျလေးမြား စိမျ့ထှကျလာ၏။ ဒျေါ စန်ဒာကြျောမှာ ဘေးမှ မူးမှောကျနသေော လငျတျောမောငျအား ဂရုမစိုကျတော့ပဲ အားမလို အားမရဖွငျ့ ဖငျကွီး ကော့ကာ လကျခြောငျးထိပျနှငျ့ စောကျခေါငျးပေါကျအား လိုကျတနေ့ရေပွနျသညျ။
” ထပွီး … စားပှဲခုံပျေါ ပကျလကျ လှနျလိုကျ “ ဦးမငျးနိုငျမှာ စားပှဲခုံပျေါ ပကျလကျအနထေားနှငျ့ ကော့ပြံနသေော ဒျေါစန်ဒာကြျော အား ကွညျ့ရငျး စောကျပတျထဲ ဒဈမွုတျကာ ဖွညျးဖွညျးခွငျး ဖိသှငျးပဈ၏။ တဗဈြဗဈြ မွညျသံနှငျအတူ အဖုတျထဲ လီးကွီး အရငျးထိ ဝငျသှားတော့သညျ။ ” အီး …… ကြှတျကြှတျ … ဖွေးဖွေးလုပျနျော … ရှငျ့ဟာက … တုတျတယျ … ကိုမငျးနိုငျ … အဟငျ့ “ တခကျြထဲနှငျ့ လီးအရငျးထိ ဝငျလာသဖွငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ မကျြစိမကျြနှာ ပကျြကာ ဒူးကှေး မွှောကျပွီး ခုံပျေါ ထောကျထားသော လကျမောငျးအိုး ၂ဖကျအား ဆုပျကိုငျ ထားလိုကျ၏။ တုတျခိုငျ ကွီးမားသော လီးကွီးမှာ စောကျပတျထဲ မဆနျ့မပွဲ ဝငျထှကျ နသေညျ။ ဒူးမွှောကျခံထားသဖွငျ့ လီးအရငျးနား ရောကျတိုငျး ကပျမသှားစရေနျ ဒူးဖွငျ့ တှနျးထားရ၏။ စောကျခေါငျးဝ လေးမှာ လငျဖွဈသူ ဦးနသေျော လီးတခြောငျးသာ ဝငျဘူးသဖွငျ့ စံခြိနျမှီ လီးကွီးအား အံကွိတျခံနရေသညျ။
မကျြနှာတဝိုကျ ခြှေးစေးပွနျကာ အံကွိတျခံနသေော မကျြနှာခြောခြောလေးအား ကွညျ့ကာ ဦးမငျးနိုငျမှာ နို့အုံတဖကျအား ကုနျးစို့ ကာ နို့သီးခေါငျး နီတာရဲလေးအား မနာ့တနာ ကိုကျပေးလိုကျ၏။ လီးတဝကျလောကျပဲ အထုတျသှငျး လုပျကာ လှတျနသေော နို့အုံ တဖကျအား ညှဈခြေ ပေးနတေော့သညျ။ ခဏအကွာတှငျ လီးအရငျးထိ ဆကျကနဲ့ ဆောငျ့လိုးရငျး ခါးအားဖွငျ့ ဝိုကျပေးရာ လီး အရငျး အောကျဖကျမှ လဥနှဈလုံးမှာ ဒျေါစန်ဒာကြျော ဖငျဝလေးအား မထိတထိဖွငျ့ ပှတျသပျပေးသလို ဖွဈနေ၏။ စောကျခေါငျးထဲ ဒဈဖူးကွီးမှ ခြိတျဆှဲပေးရငျး နို့သီးခေါငျးနှဈဖကျအား တလှညျ့စီ စို့ပေးနသေဖွငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျောကလညျး ပေါငျနှဈဖကျ ဖွဲပေးရငျး မသိမသာလေး ကော့ထိုးနသေညျ။ မကျြလုံးရှဲကွီးမြားနှငျ့ ဦးမငျးနိုငျအား စိုကျကွညျ့ကာ တအီးအီးဖွငျ့ ညညျးသံလေး ပေးလိုကျ ပွနျ၏။ ဦးမငျးနိုငျမှာ နို့စို့ရငျး မကျြနှာလေးအား အဆကျမပွတျ ကွညျ့နသေဖွငျ့ အကွညျ့ခငျြးဆုံသညျနှငျ့ နူတျခမျးခငျြး တစေု့ပျ လိုကျသညျ။ နို့အုံနှဈဖကျအား စုံညှဈကာ အရငျးထိ ကပျထားသော လီးအား ဒဈဖြားနားထိ ထုတျကာ တဆုံး ဆောငျ့လိုးပဈ၏။
” ဗဈြ … အ …… ဘှတျ … အားးးး ………… အမလေးးး “ စောကျပတျထဲ မဆနျ့မပွဲဖွငျ့ လီးကွီး ဝငျထှကျနရော ဒျေါစန်ဒာကြျော၏ ရငျဘတျလေး ကော့တကျလာပွီး လကျနှဈဖကျက ဦးမငျးနိုငျ လကျမောငျးအိုး ၂ဖကျအား ကုတျခွဈပဈသညျ။ ” အီး …… နာလိုကျ တာ ကိုမငျးနိုငျရယျ … အဟငျ့ ဟငျ့ … ဖွညျးဖွညျးပဲ လိုးပါနျော “ သို့သျော ဒီတကွိမျ ဦးမငျးနိုငျမှာ မညှာတော့ပဲ ကော့ပြံနအေောငျ ဆောငျ့လိုးပဈ၏။ လီးကွီး ဝငျသှားတိုငျး ဒျေါစန်ဒာကြေျာ့ စောကျပတျနူတျခမျး သားလေးမှာ လိပျပါသှားကာ လီးပွနျအထုတျတှငျ အပွငျသို့ ဖေါငျးကားပါလာပွနျသညျ။ စောကျခေါငျး အတှငျးသားမြားအား လီးအရညျပွား တငျးတငျးဖွငျ့ ပှတျဆှဲခံရသဖွငျ့ နာ လညျးနာ ကောငျးလညျးကောငျး အရသာ ၂မြိုး တပွိုငျထဲ ခံစားနေ၏။ ဦးမငျးနိုငျမှာ မနားတမျး ဖိလိုးရငျး ခါးအားဖွငျ့ ကွိတျမှကော တခကျြခငျြး ဆောငျ့လိုးပေးပွနျသညျ။
တဖွညျးဖွညျး စောကျရညျကွညျလေးမြား ထှကျလာကာ တဇှိဇှိ တဇှပျဇှပျဖွငျ့ လီးအရသာ တှလေ့ာရ၏။ လီးကွီး ပွနျအထုတျတှငျ စောကျခေါငျး ထဲ ဟာသှားသဖွငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ ဖငျကွီးကွှလာပွီး လီးအရငျးထိ လိုကျကပျပေးနမေိတော့သညျ။ အသံမ ထှကျအောငျ အံတငျးတငျးကွိတျရငျး ဖငျကွီးအား ကော့ကော့ ပေးနမေိတော့၏။ ” ရှီးးးး … အားဟား … အငျ့ … စန်ဒာ လေးဘကျ ကုနျး လိုကျ “ အလိုးခံ ကောငျးနစေဉျ ဦးမငျးနိုငျ စကားကွောငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျော တယောကျ တုံ့ဆိုငျးတုံ့ဆိုငျးဖွဈသှားပမေယျ့ ဦးမငျး နိုငျမှာ လီးအား စောကျပတျထဲမှ ဆှဲထုတျလိုကျ၏။ ရှကျလညျးရှကျ ကာမအရှိနျလညျး တကျနသေဖွငျ့ မွနျမွနျပွီးသှားစရေနျ စားပှဲခုံ ပျေါတှငျ လေးဘကျထောကျ ကုနျးပေးလိုကျသညျ။ ဦးမငျးနိုငျမှာ ခါးအား လကျဖွငျ့ဖိကာ ဒူးခေါငျး ၂ဖကျအား ကားခိုငျးရငျး ဖငျကွား မှ ပွူးထှကျနသေော အဖုတျ အကျကှဲကွောငျးထဲ လီးဖွငျ့ အထကျအောကျ ပှတျသပျပေးကာ တခကျြထဲ လီးအရငျးထိဝငျအောငျ ဆောငျ့သှငျးပွနျ၏။ ဒျေါစန်ဒာကြျော တယောကျ အသံမထှကျအောငျ ထိနျးထားသညျ့ကွားမှ အားကနဲ့ အျောမိလိုကျပွနျသညျ။
” အားးးးး အမေ့ … သပေါပွီ …… ကြှတျကြှတျ “ အသံကအနညျးငယျ ကယျြသှားသဖွငျ့ မူးအိပျနသေော လငျဖွဈသူမြား ကွား သှားမလားဟု စိုးရိမျနသေျောလညျး ဦးမငျးနိုငျမှာ ဆှဲဆှဲ လိုးနတေော့၏။ ဆောငျ့ခကျြက ထိထိမိမိနှငျ့ စောကျခေါငျးအတှငျးသား ထဲ ဒဈကွီးမှ ပှတျဆှဲနရော ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ ဖငျကွီးကော့ကာ လီးဝငျလာတိုငျး နောကျပွနျပွနျဆောငျ့ပေး လိုကျပွနျသညျ။ ” အို အို … ကောငျးလာပွီ ကိုမငျးနိုငျရယျ … စန်ဒာ ခံနိုငျပါပွီ … စိတျကွိုကျသာ လိုးတော့ … အ အားးး အားးးး ……… “ ဦးမငျးနိုငျမှာ တုတျ ခိုငျသောလီးကွီးနှငျ့ စောကျဖုတျထဲ ပဈလိုးရငျး နို့အုံ နှဈဖကျအား ဆုပျခပြေေးနေ၏။ ” ဘှတျ … အ … ဗဈြ ဗဈြ … အမလေး … ကြှတျ “ လီးကွီးမှာ အဖုတျထဲ စီးကပျြနပွေီး ဆောငျ့အားကလညျး အားပါသဖွငျ့ ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာ စုပျသပျညညျးကာ စိတျတှေ ဆောကျတညျရာမရပဲ ဖငျကွီးထောငျကာ ရှကေို့ယျလုံးအား ခုံပျေါ ပိပွားနအေောငျ ကပျထား လိုကျ၏။ သားအိမျဝ ဒုတျခနဲ့ လာလာ ဆောငျ့သဖွငျ့ အံကွိတျကာ တောငျ့ခံနရေငျး စောကျရညျမြား ပနျးထုတျ ပဈတော့သညျ။ ထိုစဉျ မူးအိပျနသေော ဦးနသေျော နိုးလာ ကာ အိပျခငျြမူးတူးဖွငျ့ အိမျသာဘကျ သေး သှား ပေါကျရာ ဦးမငျးနိုငျမှာ လီးအား အမွနျ ပွနျထုတျ ကာ အရငျထိုငျခဲ့သော ထိုငျခုံပျေါ ပွနျထိုငျ နလေိုကျ၏။
ဒျေါစန်ဒာကြျောမှာလညျး ခုံပျေါမှ ဆငျးကာ အရကျ ပုလငျးမြား ဘီယာပုလငျးမြား သိမျးဆညျး နတေော့သညျ။ နောကျရကျ မနကျ လငျမယား ၂ယောကျလုံး ဦးမငျးနိုငျ အား လယေဉျကှငျး လိုကျပို့ရာ ဦးနသေျောမှာ သူငယျခငျြး ဖွဈသူအား မွနျမာပွညျ အမွနျ ပွနျလာရနျ ပွောနရှော၏။ ” မငျး ရှယျယာတှေ … အကုနျရောငျးပွီး … အမွနျ ပွနျလာကှာ … မငျးနိုငျ “ ” အေးပါ … နသေျောရာ … မငျးကသာ ဇှတျချေါနတော … မငျး မိနျးမ က … မလှုပျပါလား “ ” ဟမျ … စန်ဒာကလညျး … ကိုမငျးနိုငျ ကို … မြျောနပေါ့မယျရှငျ “ ဒျေါစန်ဒာကြေျာ့ စကားကွောငျ့ ဦးမငျးနိုငျ မကျြနှာကွီး ပွုံးရှငျ သှားရာ ထိုအပွုံးကိုတော့ ဦးနသေျော တယောကျ နားလညျနိုငျမညျ မဟုတျပေ။ စိတျကူးယဉျ ဇတျလမျး လေးအား ဒီမှာပဲ ရပျနားရငျး စ/ဆုံး ဖတျရှု့ပေးသော မိတျဆှမြေားအား ကြေးဇူး တငျရှိ ပါသညျ။
ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်း သတိရနေမှာပါ (စ/ဆုံး)
” အ … အမေ့ … ကိုမင်းနိုင် … ဖြည်းဖြည်း လုပ်ပါရှင် … အဟင့် ဟင့် “ ဒေါ်စန္ဒာကျော် တယောက် သူမတို့ လင်မယား အိပ်သော ကုတင်ပေါ်တွင် လေးဖက်ထောက်ကာ ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်ပေးထားရ၏။ ကော့ထွက် ဝိုင်းစက်နေသော ဖင်သားစိုင် ဖွေးဖွေး ၂ခြမ်းကြား စောက်ပတ်မှာ ဖေါင်းကြွ ထွက်နေ ပြန်သည်။ ဦးမင်းနိုင်မှာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ခါးလေး အား လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် စုံကိုင် ကာ ဆွဲလိုးနေ၏။ ဦးမင်းနိုင် လီးကြီး သူမအဖုတ်ထဲ တိုးဝင်လာတိုင်း စောက်ခေါင်း အတွင်းသားများက အလိုလျောက် ညှစ်ပေး မိ နေပြန်၏။ လင်တော်မောင်၏ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ နိုင်ငံခြားမှ ခဏ ပြန်လာသော ဦးမင်းနိုင်အား လင်ဖြစ်သူ ဦးနေ ဇော် မသိအောင် အိပ်ခန်းထဲ အလိုးခံနေရသည့် အဖြစ်။ တွေးရင်း ဝမ်းနည်းလာကာ မျက်ရည်များ ဝဲလာစဉ် စောက်ဖုတ်ထဲမှ မာကျော တောင့်တင်းသော လီးကြီး၏ အရသာက ထူးကဲနေပြန်သည်။
လင်ဖြစ်သူ လီးထက် ထွားကြိုင်း တုတ်ခိုင်သော ဦးမင်းနိုင် လီးမှာ တချီထဲနှင့် သူမ ကာမစိတ်အား သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့၏။ စောက်ပတ် ထဲ လီးကြီး ဖိသွင်း လိုက်တိုင်း စီးစီးပိုင်ပိုင်နှင့် စောက်ခေါင်းထဲ ကျင်စိမ့်ပြီး အိမ်ထောင် သက်တမ်း တလျှောက် တခါမှ မရဘူး သော ကာမအရသာလေး ရရှိနေသည်။ ကုတင်ပေါ် အိပ်ယာခင်းအား ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ကာ ခေါင်းလေး မော့တက်နေရင်း ညည်းနေရ၏။ လီးကြီး တိုးဝင်လာတိုင်း ဖင်ကြီး နောက်ကော့ပေးရာ မိနစ်နှစ်ဆယ် လောက် အကြာတွင် စောက်ခေါင်းထဲ ကျင်စိမ့် လာကာ ထိန်းထားသည့် ကြားမှ စောက်ရည်များ ပန်းထွက်ကာ အထွဋ်ထိပ် ရောက်သွားရ၏။ ဦးမင်းနိုင်မှာလည်း လည်ပင်းကြော များ ထောင်လာကာ မနားတမ်း ဆောင့်လိုးရင်း သူမစောက်ခေါင်းထဲ လရည်များ ပန်းထည့် ပစ်တော့သည်။ လရည်များ ကုန်စင် သည်နှင့် အဖုတ်ထဲမှ လီးအား ထုတ်ကာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ပါးစပ်နား တေ့ပေးလိုက်ပြန်၏။ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ လင် ဖြစ်သူ လီး တောင် ကလေး တယောက် ရသည်အထိ မစုပ်ခဲ့ဖူးပေ။ သူစိမ်း ယောင်္ကျား၏ လီးအား မလွန်ဆန် နိုင်ပဲ အသက်အောင့်ကာ ပြောင်စင် နေအောင် စုပ်ပေး လိုက်ရတော့သည်။
” အားပါးပါး … ရှီးးးး … စန္ဒာရယ် … အားဟား … ရပြီ ကုတင်ပေါ်ကဆင်းပြီး … ပါးစပ်လေး … ဟထား “ ” ရှင် … ဘာ ဘာ ဘာ လုပ် … မလို့လဲ … ကိုမင်းနိုင် “ ” စကားမများနဲ့ … စန္ဒာ … မင်းနဲ့ငါ လိုးထားတဲ့ … ဗွီဒီယို ဖိုင်လေး … မင်းယောင်္ကျား နေသော့် ဖုန်းထဲ ပို့လိုက်ရမလား “ ” ဟင် … မ လုပ် ပါ နဲ့ … ကျမ ရှင်ခိုင်းတာ … လုပ်ပါ့မယ် “ ဒေါ်စန္ဒာကျော် မျက်နှာလေး ဖွေးစွပ်သွား ကာ ကြောက်စိတ်များ ဝင်ရောက်လာခဲ့၏။ ဦးမင်းနိုင် စိတ်တိုင်းကျ ကုတင်အောက် ဆင်းကာ ဒူးထောက်လျက် အနေထားဖြင့် ပါးစပ်လေး ဟထားပေးလိုက်ရသည်။ ဦးမင်းနိုင်မှာ ခန္ဓာကိုယ် ဗလာဖြင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ မယားချောလေးအား စူးစိုက်ကြည့် ကာ ကုတင်ပေါ်မှ ခြေနှစ်ချောင်း တွဲလောင်း ချထိုင်လိုက်၏။ ထူကဲသော မျက်ခုံးနှင့် မျက်ရည်ဝဲနေသော မျက်နှာချောချောလေး အား ခေါင်းမှ ဆွဲယူကာ ပေါက်ကြားထဲ သွင်းပြီး ဟထားသော နူတ်ခမ်းဖူးဖူး လေးထဲ သေးပေါက်ထည့်လိုက်တော့သည်။
” အု … ဝူးးး ဖလူးး ဖလူးလူးးး … ဂွတ် ဂွတ် … အွိ … ဝု ဖလူးးးး “ ” ရသလောက် မျိုချ … စန္ဒာ … အင်း ဟုတ်တယ် “ ဒေါ်စန္ဒာ ကျော်မှာ ၂ကြိမ် တိတိ အလိုးခံပြီးတိုင်း ဦးမင်းနိုင် သေးများ သောက်နေရ၏။ မျက်ရည်များ စီးကျလာရင်း ငံကျိကျိ သေးများအား ကြိတ်မိတ် မျိုချ ပစ်လိုက် တော့သည်။ ” ရပါပြီ … ငါ အပြင်သွားဦးမယ် … အော် ဒါနဲ့ … ညကျ … နေသော့် အရက်ခွက်ထဲ … ငါ ပေးတဲ့ အိပ်ဆေး ထည့်ဖို့ မမေနဲ့ “ ပြောပြီးသည်နှင့် ဦးမင်းနိုင်မှာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ မျက်နှာ အနှံ့ လီးဖြင့်ပွတ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင် သွား တော့၏။ ဦးမင်းနိုင် အပြင် ထွက်သွားတော့မှ ဒေါ်စန္ဒာကျော် တယောက် အိပ်ယာပေါ် ဝမ်းလျား မှောက်ကာ စိတ်လွတ် ကိုယ် လွတ် ငိုချလိုက်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ရက်ခန့်မှ အဖြစ်ပျက်များအား ပြန်တွေး နေမိ၏။
” စန္ဒာ … သီတင်းကျွတ် ကျောင်းပိတ်ရက်ကျ … ကလေးကို … သူ့ အဘွားအိမ် ပို့ထားလိုက်ပါ့လား “ ” ဟင် … ဘာလို့လဲ … ကို သော် ကလည်း “ ” စန္ဒာနဲ့ လွတ်လွတ် လပ်လပ် … မနေရတာ ကြာပြီလေ “ ” အိုရ် … ကိုသော်နော် … အသက်ကြီးမှ ယွမနေနဲ့ … ဟွန့် “ ဒေါ်စန္ဒာကျော် ရှက်ပြုံးလေးနှင့် လင်တော်မောင်အား ပြန်ပြောနေသည်။ သူမကိုယ်တိုင်လည်း တခါတခါ စိတ်လွတ်ကိုယ် လွတ် ပျော်ခဲ့ကြသည့် အိမ်ထောင်ဦး ဘဝ အစလေးအား သတိရမိနေ၏။ အသက် ၃၅နှစ်သာ ရောက်လာရာ ခုထိ လင်ဖြစ်သူနှင့် သားလေး ကျော်ကျော် အတွက်သာ စဉ်းစားပေး၏ သူမ အတွက် မစဉ်းစား မိပေ။ သားလေး ကျော်ကျော်မှာ ဒီနှစ် သူငယ်တန်း စ တက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ၆နှစ်ခန့် ကလေး အတွက်နှင့် အချိန်ကုန်လာရာ ကာမစည်းစိမ်လေးများ မဝတဝဖြင့် နေလာခဲ့ရ၏။ ခု ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ဦးနေသော် ပြောမှ ရမ္မက်စိတ်လေး နိုးထ လာခဲ့တော့သည်။
” ဟော … ဘာတွေ စဉ်းစားနေတာလဲ … စန္ဒာရယ် “ ” ဘာမှ … မဟုတ်ပါဘူး ကိုသော် ရယ် သားလေးကို ကျောင်းပိတ်ရက် … အ မေတို့ဆီ စန္ဒာ သွားပို့လိုက်ပါ့မယ် … ဒါပေမယ့် ကိုသော် … သောက်ရင် အိမ်မှာပဲ … သောက်ရမှာနော် … အပြင် မသောက်ရဘူး “ ” အင်းပါ … ၁၀ရက်စာ … ဘီယာ ဖာလိုက် ဝယ်ထားလိုက်မယ် … စန္ဒာက … အမြည်းလုပ်ပေး “ ” လုပ်ပေးမှာပေါ့ … အပြင်မ သောက်ရင် … ပြီးရော “ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ ကလေးအမေ ဖြစ်သော်လည်း ခုထိ နုနယ်ချောမောတုန်းပင်။ အသားဖြူပြီး ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားက ခုထိ လူတိုင်း ငေးယူရ၏။ ယောက်ျား ဖြစ်သူ ဦးနေသော်မှာ ကုမ္ပဏီ တခုမှ စာရင်းစစ် တယောက်မို့ မကြာခဏ နယ်မှ ကုမ္ပဏီ ရုံးခွဲများသို့ ခရီး ထွက်လေ့ရှိသည်။ ဦးနေသော်မှာ အသက် ၃၈နှစ်မို့ ဒေါ်စန္ဒာကျော်ထက် ၃နှစ်ခန့် ကြီး၏။ အပျိုဘဝ တွင် ကုမ္ပဏီ အရောင်း စာရေး ဝင်လုပ်ရာ ဦးနေသော်နှင့် တွေ့ကာ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကလေး တစ်ယောက်ရပြီး နောက်ထပ် မယူတော့ပေ။
ဦးနေသော်မှာ စကားပြော ပါးနပ်၍ လူပေါင်းဆန့်သဖြင့် ကြားပေါက်ဝင်ငွေများပါ ရရှိနေ၏။ ဒေါ်စန္ဒာကျော်တို့ သားအမိအား နှစ် ထပ်တိုက် ဆောက်ပေးကာ အိမ်ဖေါ် ထားရှိပေးသည်။ အိမ်ထောင်ကျကတည်းက မယားချောလေးအား အလုပ်ထွက်စေကာ အိမ် မှာပင် အေးဆေး နေခိုင်းထား၏။ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ အိမ်ဖေါ် ဒေါ်ညွှန်အား အိမ်မှု့ကိစ္စများ ကူလုပ်ရင်း လင်တော်မောင် အိမ်ပြန် ရောက်လျင် ကိုယ်ဖိရင်ဖိ ပြုစုပေးရုံပင်။ ခေတ်မှီ်စွာ နေထိုင်သော်လည်း ဦးနေသော်အား ချစ်ကြောက် ရိုသေစွာ နေလာခဲ့သည်။ ခုလည်း လင်တော်မောင့် ဆန္ဒအတိုင်း သားလေး ကျော်ကျော်အား မိဘအိမ် ပို့ကာ အိမ်ပြန်လာပြီး ညပိုင်း လင်ဖြစ်သူ ဘီယာ သောက်စဉ် မြည်းရန် အကြော် အလှော်များ ကိုယ်တိုင် ချက်ပြုပ် နေတော့၏။ အိမ်ဖေါ် ဒေါ်ညွှန့်မှာ လစာ ကြိုထုတ်၍ မွေးရပ်မြေ သို့ ခဏ ပြန်သွားသဖြင့် လင်မယား ၂ယောက်သာ ကျန်ရှိရာ ကာမကိစ္စအတွက် တနေကုန် ရင်ခုန်နေမိသည်။ အားလုံး ပြင်ဆင် ပြီးသည်နှင့် ညနေပိုင်း ရေမိုးချိုးကာ လင်ဖြစ်သူ အား မျှော်နေတော့၏။
ဦးနေသော် အိမ်ပြန်ရောက်စဉ် အနက်ရောင် ကိုယ်ကျပ် အင်္ကျီလေးနှင့် ထမိန်စကပ်လေး ဝတ်ထားသော ဒေါ်စန္ဒာကျော်အား ကြည့်ကာ အားရကျေနပ် နေမိသည်။ ခရီးထွက်ချိန် ဖုန်းထဲ ရိုက်ထားသော မယားဖြစ်သူ၏ ဆက်စီကျသော ပုံလေးများအား ကြည့် ကာ ဂွင်းထုရသည်မှာ အကြိမ်ကြိမ်ပင်။ တအိမ်လုံး ၂ယောက် ထဲသာ ရှိသည်ဟုသော အသိနှင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ကော့ထွက်နေ သော ဖင်သားစိုင်များ တင်းမောက် နေသော နို့အုံများက အနီးကပ် မြင်ရုံဖြင့် ဦးနေသော် မှာ စိတ်ကြွ နေတော့သည်။ ဧည့်ခန်းထဲမှ ထလာပြီး လင်ဖြစ်သူအား ဖက်နမ်းရာ ဒေါ်စန္ဒာကျော် ကိုယ်သင်းနံ့က ဦးနေသော် အား ရင်ခုန်စေပြန်၏။ အသက်ရှူလိုက်တိုင်း ကြွ တက် လာသော နို့အုံများက ဦးနေသော် ရင်အုပ်အား ဖိကပ် ထားသဖြင့် သွေးများ ဆူပွက် လာတော့သည်။
” စန္ဒာရယ် … လှလိုက်တာကွာ “ ” ဟွန့် … တော်ပါ … အပိုတွေ … ခရီးထွက်တိုင်း … စန္ဒာ့ ဘက်ကပဲ ဖုန်းဆက်ရတာ “ ” ဟာ … ကိုသော် က … အလုပ်ထဲရောက်ရင် … စိတ်နှစ်တတ် လို့ပါကွာ “ ” ကဲ … ရေချိုး ကိုသော် … အမြည်း အဆင်သင့် လုပ်ပြီးသား … သောက်ပြီး အိပ်ရမှာနော် … အပြင် မထွက်ရဘူး “ ” အင်းပါ … စန္ဒာရယ် “ လင်မယားနှစ်ယောက် စကားပြောလိုက် ဦးနေ သော်က သောက်လိုက် ဒေါ်စန္ဒာကျော်က အမြည်းခွံ့လိုက်နှင့် ငယ်မူငယ်သွေးများ ပြန်ကာ မိုးချုပ်မှ အိပ်ယာ ဝင်ခဲ့ကြ၏။ ဒေါ်စန္ဒာ ကျော်မှာ ညဝတ် အင်္ကျီ အပါးလေးနှင့် တွဲလျက် ဂါဝန် အတိုလေး လဲကာ ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှန် လှဲချလိုက်သည်။ ဦးနေသော် မှာ မယားဖြစ်သူ ကိုယ်လုံး အိအိလေးအား ဖက်ကာ နူတ်ခမ်းအား အငမ်းမရ ဆွဲစုပ် တော့၏။
” ပြွတ် … ပလပ် ပလပ် “ နူတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ရင်း ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ဖင်ကြီးအား ပွတ်သပ်နေသည်။ ဒေါ်စန္ဒာကျော် ကလည်း ပုဆိုးပေါ်မှ ဦးနေသော် ပေါင်ကြားအား တုံ့ပြန် ပွတ်သပ်လိုက်၏။ ပေါင်ကြားမှ လီးကြီး မာထင်လာရာ ပုဆိုးခါးပုံစ ဖြည်ကာ လက်လျှို နိုက်ရင်း လီးအား ခပ်တင်းတင်းလေး ဆုပ်ကိုင် ထားသည်။ ” မာထင်နေပြီနော် … ကိုသော် “ ” အင်း … ဒီလို မနေရတာ ကြာပြီလေ … စန္ဒာကလည်း “ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ ကိုယ်လုံး စောင်းကာ မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေထားဖြင့် ဦးနေသော် နူတ်ခမ်းအား ဆွဲ စုပ်ကာ လီးအား ကွင်းတိုက် ပေးနေသည်။ ဦးနေသော်ကလည်း ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ဖင်သားစိုင်ကြီးအား ပွတ်သပ်ရင်း ညဝတ် ဂါဝန် လေးအား ဆွဲတင်လိုက်၏။
” အဝတ်တွေ ချွတ်ရအောင် … စန္ဒာ “ ၂ယောက်သား အဝတ်စားများ ထချွတ်ရာ ခန္ဓာကိုယ် ဗလာဖြစ်သွားသော ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ကိုယ်လုံးမှာ တက်မက်စရာပင်။ ဦးနေသော်မှာ မယားဖြစ်သူ နို့အုံအား ပွတ်သပ်ကာ ပြန်လှဲချလိုက်ပြန်သည်။ ဦးနေသော် လက်က မယားဖြစ်သူ ပေါင်ကြားကို ပွတ်သပ်နေသလို ဒေါ်စန္ဒာကျော်ကလည်း လင်တော်မောင့် လီးအား ဂွင်းတိုက်ပေးနေ၏။ ဦးနေသော် လီးမှာ ပုံမှန်ဆိုဒ်ပင် ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ လင်ဖြစ်သူ လီးကိုသာ အလိုးခံဖူးသဖြင့် အားရကျေနပ်နေမိသည်။ ခဏအကြာ ပက်လက် လှန်ပေးသော ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ပေါင်ကြားထဲ ဒူးထောက် နေရာယူကာ အပေါ်မှ ဖိလိုးတော့သည်။
” ဗျစ် … အ … အ … ဇွိ အားးး … ဘွတ် ဘွတ် “ လီးအရင်းထိ ဝင်သွားသော်လည်း တဝက်ခန့် အထုတ် အသွင်း လုပ်ကာ ဆီးခုံခြင်း ဖိကပ်ရင်း ကြိတ်လိုးလိုက်၏။ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ အောက်မှ လင်တော်မောင်၏ ခါးအား ဆွဲကာ ဖင်ကြီး ကော့ပေးထားသည်။ ဆီးခုံး ချင်း ကပ်ကာ ကြိတ်လိုးနေသဖြင့် စောက်စိအား ပွတ်တိုက်ခံရပြီး ကာမ စည်းစိမ်လေး ရရှိ နေတော့သည်။ ” ဇွိ ဇွိ … အ … ဘွတ် ပြွတ် … ဖွပ်ဖွပ် “ ဆောင့်လိုးလိုက် ကြိတ်လိုးလိုက်ဖြင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများက လီးအား ညှစ်ပေး နေ ပြန်၏။ ” ဘွတ် … ဗျစ် …… ရှီးးးးး … အားဟား …… ကောင်းလိုက်တာ စန္ဒာရယ် “ ” အ အားးးး … လိုး လိုး …… ကိုသော် … နာနာ လေး ဆောင့်လိုးပေး … အင်းဟင်း “ လီးသေးသော်လည်း ဦးနေသော်၏ ထိထိမိမိ ဆောင့်ချက် များကြောင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော် တ ယောက် အထွဋ်ထိပ် ရောက်သွားချိန် စောက်ပတ် အတွင်းသား များက အလိုလျောက် လီးအား ညှစ်ပေး ထားသည်။ ဦးနေသော် လည်း မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ လရည်များ ပန်းထုတ် ပစ်ရ တော့၏။ ခဏအကြာ နှစ်ယောက်သား မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖက်ရင်း အိပ်ပျော် သွားကြသည်။ နောက်ရက် ညတွင် လင်ဖြစ်သူ ဦးနေသော်၏ ငယ်သူငယ်ချင်း တယောက် နိုင်ငံခြားမှ မြန်မာပြည် ပြန်လာရာ အိမ် တွင် အတူ သောက်ရာမှ မထင်မှတ်သော အဖြစ်ပျက်များ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတော့၏။
လင်ဖြစ်သူ ဦးနေသော်နှင့် ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်း ဦးမင်းနိုင်တို့ ရှေးဟောင်း နှောင်းဖြစ်များ ပြောကာ အရက်သောက်နေကြ ရင်း ည ၁၂ကျော်ကျော် တွင် အိပ်ချင်လာသဖြင့် သူမတို့ လင်မယား အိပ်ခန်းထဲ ဝင်လာကာ အိပ်ပစ်လိုက်၏။ လင်တော်မောင်အား စောင့်ရင်း အိပ်ယာပြင်ထက် လူးကာလိမ့်ကာဖြင့် အိပ်မောကျသွားတော့သည်။ ထမိန်လေးမှာ ပေါင်လယ်ထိ လှန်တက်နေကာ ကွေးကွေးလေး အိပ်ပျော်နေစဉ် အခန်းတံခါး ဖွင့်သံနှင့်အတူ ခြေသံကြားရသဖြင့် ဖျက်ကနဲ့ နိုးလာခဲ့၏။ သို့သော် မျက်လုံးလေး မှိတ်ကာ အိပ်ချင် ယောင် ဆောင်နေခဲ့သည်။ ခဏအကြာ ကုတင်လှုပ်သံနှင့် အတူ သူမ ထမိန်လေး ခါးထိ ဆွဲလှန်ခံလိုက်ရပြန်၏။ ကွေးထားသော ဒေါ်စန္ဒာကျော့် ပေါင်တန်ကြားမှ အမွှေး ကောက်ကောက် လေးများ ဖုံးအုပ်ထားသော စောက်ဖုတ်လေးက ပြူးပြီး ထွက်နေသည်။ ခပ်နွေးနွေး အသားစိုင် တခုက စောက်ဖုတ် အက်ကွဲကြောင်းထဲ ပွတ်ဆွဲနေရာ ဖင်ကြီး အား ကော့ပေးလိုက်၏။ လ မွှေးများက ဖင်၂ခြမ်း ကြားလေးအား ကြိတ်ပွတ်နေရာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ရမ္မက်စိတ်လေး ထကြွလာကာ အသံထွက် တောင်းဆို လိုက်တော့သည်။
” လုပ်တော့ ကွာ…. ကိုသော်ကလည်း … ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး … ဟွန့် “ ခဏအကြာ သူမနောက်ကျောဘက်မှ အဖုတ်လေးအား ပွတ်ဆွဲနေသော လီးကြီးမှာ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ တိုးဝင် လာတော့၏။ ” အ … အား … ကျွတ် ကျွတ် “ ဒေါ်စန္ဒာကျော် တ ယောက် မျက်တောင်များ မှေးစင်း သွားကာ နူတ်ခမ်းလေး စိကာ အံကြိတ် ညည်းငြူမိသည်။ ထူခြားသည်က လင်ဖြစ်သူ လီးမှာ ဒီည တုတ်လာသလို ခံစားနေရ၏။ စောက်ပတ် လေးထဲ လီးကြီး တိုးဝင်လာရာ ပြည့်ကြပ်နေသဖြင့် နူတ်ခမ်းသားလေးများ လိပ်ဝင် သွားတော့သည်။ ပုံမှန်လေး နောက်မှ လိုးနေရာ တခါတခါ အဖုတ်ထဲမှ လီးမှာ ကျွတ်ထွက်ပြီး လီးထိပ်က ဖင်ပေါက် လေး ထောက်မိနေပြန်၏။ ဒေါ်စန္ဒာကျော် ဖင်ဝလေး လီးနှင့် ထောက်မိတိုင်း ခါးလေးတွန့်ကာ ကြက်သီးများ တဖြန်းဖြန်း ထလာရသည်။ ၁၀ချက်လောက် ဆောင့်လိုးလိုက် ကြိတ်လိုးလိုက်နှင့် လင်ဖြစ်သူ၏ လိုးချက်များမှာ ခါတိုင်းနှင့် မတူ တမူထူးနေပြန်၏။ ဆောင့် လိုးလိုက်တိုင်း အသဲခိုက်အောင် ခံစားနေရ ပြန်သည်။
” ဘွတ် …ဖွပ် … ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် … ဇွိ … ဖွပ် ဘွတ် “ ” အ … အား … ဖြည်းဖြည်း …ကိုသော်ရယ် … နာတယ်ကွာ … အဟင့် ဟင့် “ ” ပက်လက်လှန်လိုက်ပါ့လား … စန္ဒာ “ ” ဟင် … ရှင် ရှင် … ကိုသော် … မဟုတ် ဟုတ် …… “ နောက်ကျောဘက်မှ စကားသံ ကြောင့် လင်ဖြစ်သူ မဟုတ်မှန်း ရိပ်မိလိုက်တော့သည်။ ချက်ချင်း ဒူးကွေး လျက် အနေထားမှ ကိုယ်လုံးလှည့် ကြည့်လိုက်ရာ အောက်ပိုင်း ဗလာဖြင့် သူမနောက်ကျောဘက်မှ ဘေးတစောင်းလှဲကာ လိုးနေသော လင်ဖြစ်သူ၏ ငယ်သူငယ်ချင်း ဦးမင်းနိုင် အား တွေ့လိုက်ရ၏။ ကြောင်ကြည့်နေစဉ် ဦးမင်းနိုင်မှာ သူမအား ပက်လက် လှန်ကာ အပေါ်မှ ခွထားလိုက်ပြန်သည်။ ” အဟင့် ဟင့် … မလုပ်ပါနဲ့ … ကိုမင်းနိုင်ရယ် … ဆင်းပါ … ကျမ ယောင်္ကျား သိသွားရင် မကောင်းပါဘူး “ ” နေသော်… မူးပြီး အိပ်သွားပါပြီ … စိုးရိမ် မနေပါနဲ့ … စန္ဒာရယ် … ငါ နင့်ကို … မြင်မြင်ချင်း လိုးချင်နေတာဟ “ ” အိုရ် … ကျမက … ရှင့် သူငယ်ချင်း မိန်းမလေ … အ ဟင့် ဟင့် “ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ သူမပေါင်ပေါ် ဖိထိုင်ထားသော ဦးမင်းနိုင် ရင်ဘတ်အား တွန်းချနေရာ အားမမျှသဖြင့် အရာမရောက် ခဲ့ပေ။ ဦးမင်းနိုင်မှာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ လက်နှစ်ဖက်အား ညာလက်ဖြင့် ဖမ်းချုပ်ကာ ဘယ်လက် က လီးအား အောက်နိမ့်ချရင်း စောက်ဖုတ်ထဲ ဖိသွင်း ပစ်ပြန်သည်။ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ လီးကြီး အဖုတ် အက်ကွဲ ကြောင်းထဲ ရောက်သည်နှင့် ပေါင်နှစ်ခြမ်းအား စိ ပစ်ရာ အပေါ်မှ ခွထိုင်ထားသော ဦးမင်းနိုင်၏ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ကြောင့် စိမရတော့ပေ။
” ပေါင်ဖြဲထားလေ … စန္ဒာရဲ့ … စိထားတော့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသာတွေ … ပွန်းပဲ့ကုန်မယ် “ ” အိုရ် … မလုပ်ပါနဲ့တော့ … မ သင့်တော်ပါဘူး “ နှစ်ဦး လေသံမှာ ခပ်တိုးတိုး ကြိတ်ပြောနေရာ ခဏအကြာ ဒေါ်စန္ဒာကျော် စောက်ပတ်လေးမှာ ရုန်းကန်ရင်း လီး ထိပ် ဖြင့် ပွတ်မိနေရာ သဘာဝ အတိုင်း စောက်ရည်ကြည်များ အိုင်ထွက် လာတော့သည်။ ဦးမင်းနိုင် လီးထိပ်မှာ စောက်ခေါင်းဝ လေး ထောက်မိချိန် ဗျစ်ကနဲ့ လီးတဝက်ခန့် ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ အဖုတ်လေးထဲ တိုးဝင်သွား၏။ ” ခုန … လိုးပြီးသားလေ … စန္ဒာ … ရုန်းမနေပါနဲ့ “ ” အဟင့် ဟင့် … ကျမ ယောင်္ကျားမှတ်လို့ ပေါ့ … ထုတ် ထုတ် … ရှင့်ဟာကြီး ထုတ်ပါရှင် … နာလို့ပါ “ ဦးမင်း နိုင်မှာ ဒေါ်စန္ဒာကျော့်၏ လက်နှစ်ဖက်အား လွတ် မပေးသေးပဲ ခါးအားဖြင့် အပေါ်မှ တချက်ချင်း ခွလိုး နေသည်။ ကလေးတ ယောက် အမေ ဖြစ်သော်လည်း တုတ်ခိုင်ထွားကြိုင်းသော ဦးမင်းနိုင် လီးကြီးအတွက် စောက်ခေါင်းပေါက်လေးမှာ ကျဉ်းနေပြန်၏။ လီးကြီး ပြန်ထုတ်တိုင်း စောက်ပတ် အတွင်း နှုတ်ခမ်း သားလေး များ ဒစ်ဖြင့် ချိတ်ပါ လာကာ စောက်ပတ်လေး ရဲခနဲ ရဲခနဲ ပြဲလန် သွားတော့သည်။ ပြန်ဖိလိုးချိန် အဖုတ် နူတ်ခမ်း သားများ လီးအရည်ပြားဘေး လိပ်ဝင်သွားရာ ဦးမင်းနိုင်မှာ တရှီးရှီး စုပ်သပ်ရင်း စောက်ဖုတ် အရသာ တွေ့နေမိ၏။
” အားးးးး အင့် … အင့် … ထွက်ကုန်ပြီ … အမလေးးးး “ ဒေါ်စန္ဒာကျော်တယောက် ငြင်းဆန်ရင်း စောက်ခေါင်း အတွင်းသားထဲ ပွတ်တိုက် ချိတ်ဆွဲနေသော ဦးမင်းနိုင် လီးကြီး၏ အထိတွေ့အောက် ဝပ်ဆင်း သွားရသည်။ စိတ်ဆိုးသည့် ဟန်လေးဖြင့် ဖင်ကြီး ကော့ကာ ဆီးခုံးချင်း ထိအောင် ပင့်ဆောင့်ပေးရင်း စောက်ရည် များ ထောင်ပန်း နေတော့၏။ ဦးမင်းနိုင်မှာ လီးအား ဆွဲထုတ်ကာ ခါးကော့ ပန်းနေသော ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ စောက်ပတ်အုံလေးအား လီးထိပ်ဖြင့် တဘတ်ဘတ် ရိုက်ချနေပြန်သည်။ ဒေါ်စန္ဒာကျော် တ ယောက် စောက်ရည်ပန်းထုတ်နေစဉ် ဦးမင်းနိုင်၏ လီးဖြင့် ရိုက်ချက်များက စောက်စိလေးပေါ် ကျရောက်လာကာ အသဲခိုက်အောင် ခံစား နေရတော့၏။ ထိုစဉ် ဦးမင်းနိုင်မှာ ကော့တက်နေသော ခါးလေးအား စုံကိုင်ပြီး ဒူးထောက်လျက် အနေထားနှင့်ပင် မီးပွင့်မတတ် ဆွဲလိုးလိုက်ပြန်သည်။
” ရှီးးးးးးး … အားးးး အားးးးး … အမလေးးးး … သပှေီ သပှေီ … အ အားးးးးးး “ အားပါသော လိုးချက်များက သားအိမ်ဝထိ ဒုတ်ကနဲ့ ဒုတ်ကနဲ့ လာဆောင့်မိသဖြင့် ငယ်သံပါအောင် အော်မိလိုက်၏။ အော်လိုက်သံက ဦးမင်းနိုင်ပင် လန့်သွား ရကာ လိုးချက်များ လျော့ချ ပစ်လိုက် ရတော့သည်။။ ဦးမင်းနိုင်၏ လိုးချက်များက လီးအရင်းထိ ဝင်သွားရုံမကာ လဥနှစ်လုံးက တဘတ်ဘတ်ဖြင့် ဖင် ဝလေးပါ ရိုက်မိကာ လိုးအား ပြင်းထန်လွန်းလှ၏။ ဒေါ်စန္ဒာကျော်သာ မက လင်ဖြစ်သူနှင့် အကြိမ်ကြိမ် လိုးခဲ့သော ကုတင်လေးပါ ဦးမင်းနိုင် လိုးချက်များအောက် လှုပ်ခါနေရသည်။ ဒေါ်စန္ဒာကျော် စောက်ရည်များ ကုန်စင်သွားချိန် ပေါင်နှစ်ဖက်မှာ ဦးမင်းနိုင် ပုခုံး ပေါ် ရောက်ရှိနေ၏။ပေါင်နှစ်ချောင်း ဒူးထောက် ထမ်းလျက် အနေထားနှင့် အံကြိတ်လိုးရာ စောက်ဖုတ်လေးအား ဖြဲပေးသလို ဖြစ် ရာ လီးအဝင်အထွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ၂ဦးစလုံး မြင်နေရသည်။
” အားးးး … အင့် … ဘွတ် ဘွတ် … အား … အားးးး “ ဦးမင်းနိုင်မှာ မနားတမ်းဆွဲလိုးရင်း လီးတန်တလျှောက် ကျင်တက်လာသဖြင့် ပေါက်နှစ်ဖက် အောက်ပြန်ချကာ နို့အုံနှစ်ဖက်အား ကုန်းစို့ရင်း လရည်များ ပန်းထုတ်ပြီး ဇပ်ငပ်ဇပ်ငင်ဖြင့် တဖြည်းဖြည်း ငြိမ်သက် သွားတော့၏။ ဒေါ်စန္ဒာကျော် လက်များကလည်း အလိုလျောက် ဦးမင်းနိုင် ကျောပြင်အား ခပ်တင်းတင်း ဖက်တွယ်ထား လိုက် မိသည်။ ဒေါ်စန္ဒာကျော် သတိမထားမိလိုက်သည်မှာ အဖြစ်ပျက်များအား ဦးမင်းနိုင်မှ ဖုန်းဖြင့် ရိုက်ယူ ထားခြင်းပင်။ နောက်ရက် များတွင် အကြပ်ကိုင်ကာ အမျိုးမျိုး နှိပ်စက်ပြီး လိုးတော့၏။
” စန္ဒာ … ကိုသော် ရောက်နေတာ ကြာပြီ … ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ “ ” ဟင် … ကိုသော် … ဟို ဟို … ကိုမင်းနိုင်ရော မပါဘူးလား “ ” မင်းနိုင်က … ဒီည မိုးချုပ်မှာ စန္ဒာရဲ့ … တခြား သူငယ်ချင်းတွေ … သွားတွေ့နေတာ … ဘီယာ လုပ်ကွာ … ဒီညတော့ ကိုသော် တယောက်ထဲ … အမူး သောက်ရတော့မှာ … ပြီးမှ … ဟောဒီက မယားချော လေးနဲ့ … ခိခိ “ ” အိုရ် … ကိုသော် နော် … သွား … ဟွ န့် “ လင်တော်မောင် အတွက် အမြည်းများ ကြော်လှော်ရင်း သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချမိလိုက်သည်။ ၅ရက်လောက် ရှိနေသည် လင် ဖြစ်သူ ဘီယာသောက်တိုင်း ၄လုံးလောက် ကျော်ကျော်တွင် ဦးမင်းနိုင် ပေးထားသော အိပ်ဆေး အစက်ကလေး ခပ်ကာ ဘီယာ ငှဲ့ ပေးလိုက်သည်။ ထို ဘီယာခွက် ကုန်သည်နှင့် လင်တော်မောင် ဦးနေသော်မှာ အိပ်ပျော်သွားပြီး မနက် ၉နာရီလောက်မှ နိုးလာလေ့ ရှိ၏။ ခုလည်း ဦးမင်းနိုင်မှာ မနက်က တခါ လိုးပြီး ညပိုင်း ထပ်လိုးရန် အိပ်ဆေး ခပ်ခိုင်းထားပြန်သည်။
ည ၁၀နာရီ လောက် ဦးနေသော် ဘီယာ သောက်ရင်း အိပ်ဆေး အရှိန်ဖြင့် တခူးခူး ဟောက်ကာ ဧည်ခန်းထဲတွင် အိပ်ပျော်သွား တော့၏။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုယ်လုံးအား မနိုင်တနိုင် မကာ အိပ်ခန်းထဲ တွဲပို့ထားလိုက်ရသည်။ ဒေါ်စန္ဒာကျော် တယောက် လင်ဖြစ်သူ အား အိပ်ခန်းထဲ ပို့ရင်း ခဏလှဲနေရာ အိပ်ခန်းပြင်မှ အချက်ပေးသံ ကြားရသည်နှင့် ချက်ချင်း လှဲနေရာမှ ထကာ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက် လာခဲ့၏။ အခန်းတခန်းကျော်မှ အိပ်ခန်းလေး မီးလင်းနေကာ တံခါး ဟထားသဖြင့် တွန်းဝင်ရင်း တံခါး ပြန်စိထားလိုက်တော့သည်။ အခန်းထဲ ရောက်သည်နှင့် ကုတင်၏ တောင်ဘက် ကျွန်းထိုင်ခုံပေါ် ထိုင်ကာ သူမအား စိုက်ကြည့်နေသော ဦးမင်းနိုင်အား တွေ့လိုက် ရ၏။
” နေသော် … အိပ်သွားပြီ မလား “ ” ဟုတ် “ ” လာစမ်း … ဒီနား … ထမိန် ချွတ်စမ်း “ ဦးမင်းနိုင် လှမ်းပြောရာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ ထမိန်ချွတ်ချရင်း မတ်တပ်ရပ်လျက် အနေထားဖြင့် ရှေ့တည်တည့် ရပ်နေလိုက်သည်။ ပေါက်တန် တုတ်တုတ် ဖွေးဖွေး ကြားမှာ စောက်မွှေးအုံကြီး မြင်သည်နှင့် ဦးမင်းနိုင် မျက်နှာတချက် ပျက်သွားတော့၏။ ” တောက် “ ” အင့် … အ …… အင့် … အမလေး … နာလိုက်တာ တော်ပါတော့ … ကိုမင်းနိုင်ရယ် … အဟင့် ဟင့် “ ” နောက်တခါ … ငါ ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်မှာလား … ပြောစမ်း “ ” လုပ်ပါမယ် … ရှင် “ ဦးမင်းနိုင်မှာ သူ့ရှေ့ ရပ်နေသော ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ပေါင်ဂွမှ စောက်မွှေးအုံအား လက်ဖြင့် တဗြစ်ဗြစ် ဆွဲနူတ် ပစ်နေ၏။ မနေ့က စောက်မွှေးရိတ်ခိုင်းထားရာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ မနက်ပိုင်း ဦးမင်းနိုင် အလိုးခံပြီးသည်နှင့် နေ့လည်ပိုင်း လင်ဖြစ်သူ ဦးနေသော်အား ထပ်မံ အလိုးခံခဲ့သဖြင့် ညနေစောင်းထိ အိပ်ပျော် သွားခဲ့၏။ အိပ်ယာ နိုးလာစဉ် ရေချိုးကာ ဧည့်ခန်းထဲ ခဏထိုင် စဉ် လင်တော်မောင် ဦးနေသော် အပြင်မှ ပြန်ရောက် လာသဖြင့် အမြည်းများ လုပ်ပေးရကာ အမွှေး ရိတ်ခိုင်းသည့် ကိစ္စအား မေ့လျော့သွားတော့သည်။
” နောက်တခါ … ငါခိုင်းတဲ့ အတိုင်း မလုပ်ရင် … ဒီ့ထက် နာမယ် … အင်္ကျီပါ ချွတ်စမ်း “ ” ဟုတ် … အဟင့် ဟင့် “ ဦးမင်းနိုင်မှာ ထိုင်ခုံပေါ် ထိုင်ရင်း ဘောင်းဘီ ဇစ်ဖွင့်ကာ လီးအား ဆွဲထုတ်လိုက်၏။ ” လာစမ်း ငါ့ရှေ့ … ထိုင်ပြီး ပါးစပ်ဟထား “ ဒေါ်စန္ဒာကျော် ကိုယ်လုံးတီး အနေထားဖြင့် ဦးမင်းနိုင် ပေါင်ကြား ဒူးတုတ်ထိုင်ကာ နူတ်ခမ်းလေး ဟထားပေး၏။ ” ပါးစပ်ကို … ရသလောက်ဟ … ငါ့လီးထိပ်နား တည့်တည့်လေးထား “ ဦးမင်းနိုင်မှာ သူ့ပေါင်ကြားရှေ့ ထိုင်နေသော ဒေါ်စန္ဒာကျော် အား စိုက်ကြည့်ကာ အမိန့် ဆန်ဆန် ပြောဆိုနေပြန်သည်။ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ မလွန်ဆန်ရဲဘဲ ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးတုတ် လျက် အနေထားဖြင့် လီးထိပ်နား ပါးစပ်ဟ ထား ပေး၏။ ဦးမင်းနိုင်မှာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ အပြုမူကြောင့် ကျေနပ် အားရ နေကာ လီးထိပ် တည့်တည့် ဟနေသော ပါးစပ်လေးထဲ ဒစ်ဖူး တေ့ကာ ဖင်ရှုံ့ပြီး သေးများ ညှစ်ထုတ်လိုက်သည်။ လီးထိပ် အပေါက်လေးမှ ငံကျိကျိ သေးရည်များက ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ အာခေါင်ထဲထိ အရှိန် ပြင်းပြင်း နှင့် ပန်းထွက်သွားတော့၏။
” ဝု … ဖလူးးး … အဟွတ် ဟွတ် ဟွတ် “ ငံကျိကျိ အရသာနှင့် သေးရည်များ အဆက်မပြတ် ဝင်ရောက်လာသဖြင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော် တယောက် တဟွတ်ဟွတ်ဖြင့် သီးကာ ချောင်းဆိုး နေပြန်သည်။ ဦးမင်းနိုင်မှာ သေးပန်းရင်း ခဏရပ်ကာ ဒေါ်စန္ဒာချို၏ နို့သီးခေါင်း ၂ဖက်အား လက်ဖြင့် လိမ်ဆွဲပစ်တော့၏။ ” ငါ့သေးကို … ရွံတယ်ပေါ့ … ဟုတ်လား … ဟမ် “ ” အမလေး … နာလိုက်တာ … မဟုတ်ပါဘူး … မျိုချရင်း … သီးသွားလို့ပါ ကိုမင်းနိုင်ရယ် … အားးး အားးး … အဟင့် ဟင့် ဟင့် “ ဦးမင်းနိုင်မှာ နို့သီးခေါင်း ၂ဖက် အား လက်ဖြင့် ညှစ်ချေ လိမ်ဆွဲလိုက်သဖြင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော် တယောက် မျက်ရည် များ ဝိုင်းလာတော့သည်။ ” နောက်တစ်ခါ … ငါ သေးပေါက်ထည့်ရင် … အသက်အောင့်ပြီး မျိုချ … မသီးစေနဲ့ … အင့်အင့် “ ” ဟုတ် … အမလေးးး အ အ …… သေပါပြီ … တော်ပါ တော့ရှင် … နာလို့ပါ “ ” ပါးစပ် ပြန်ဟ … သေးက ကျန်သေးတယ် မပြီးသေးဘူး “
ဦးမင်းနိုင် စကားဆုံးသည်နှင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ လီးထိပ်တည့်တည့် ကပျာကယာ ပါးစပ်လေးဟ ပေးထားလိုက်၏။ ဒီတကြိမ် ဦးမင်းနိုင်မှာ အောက် နူတ်ခမ်း ပေါ် ဒစ်ဖူး မေးတင်ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပေါက်ထည့်လိုက်တော့သည်။ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ သိမ်ငယ် စိတ်ဝင်နေရာမှ လီး အရည်ပြားနှင့် မျက်နှာတဝိုက် ပွတ်သပ်ပေးစဉ် ခံစားမှု့ ပြောင်းလာကာ ရမ္မက်သွေးများ ဆူကြွ လာရသည်။ ဦးမင်းနိုင် ပေါင်ကြားမှ လီးမှာ သူမ မျက်နှာရှေ့ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ထောင်မတ်နေ၏။ ဖြူဖွေး တုတ်ခိုင်သော သူမ ပေါင်တန်နှစ်ဖက် ကြား ဆီးခုံးလေးထက် နက်မှောင် တွန့်လိပ်နေသော စောက်မွှေးအုံကြီးအောက် စောက်ပတ် အုံမှာ တဆစ်ဆစ်ဖြင့် ဖေါင်းကြွနေ ပြန်သည်။ ဦးမင်းနိုင် လက်တဖက်မှာ လီးအရည်ပြားအား စုလိုက်ဖြဲလိုက် ပွတ်သပ်နေရာ ဒစ်ကြီး ကားထွက်လာတိုင်း အနီးကပ် မြင်ကွင်းကြောင့် ရမ္မက်ခိုးများ ဟုန်းခနဲ တောင်လောင် လာ၏။ အသားများ တဆက်ဆက် တုန်လာကာ တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီး ထ နေပြန်သည်။
” ထရပ်ပြီး … ဟိုဖက်လှည့် … ဖင်ကုန်းစမ်း “ ထူးထူးခြားခြား ဦးမင်းနိုင် ခိုင်းသမျှ လုပ်ပေး နေရသည်ကို စိတ်ထဲ အားရကျေနပ် သလို ခံစားလာရ၏။ ဦးမင်းနိုင်အား ကျောပေးကာ မတ်တပ်ရပ်လျက် အနေထားဖြင့် ဒူးကွေးကာ လက်ထောက်ထားရင်း ဖင်ကြီး နောက်ပစ် ထားလိုက်ပြန်သည်။ ဦးမင်းနိုင်မှာလည်း သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ၏ မယားချောလေး ဖင်ကြားမှ ပြူးထွက် နေသော စောက် ဖုတ်ကြောင့် ကာမစိတ်များ ထကြွနေ၏။ ဦးမင်းနိုင်မှ ခုံပေါ်ထိုင်နေရာမှ ဆက်ကနဲ့ ထရပ်ပြီး ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ခါးလေးအား စုံကိုင် လိုက်သည်။ ဖေါင်းကြွ နေသော စောက်ပတ်အုံအား လီးထိပ် လာတေ့ သည်နှင့် မျက်လုံးလေးမိတ်ကာ လီးအဝင် စောင့်နေ လိုက်၏။
” ဗျစ် … အားးးး “ ရုတ်တရက် ပစ်ဆောင့်လိုက်တဲ့ လီးကြီးကြောင့် ခေါင်းမော့ သွားပြီး ဖင်ကြီးကော့တက်သွားပြန်သည်။ မနားတမ်း ဆောင့်ချက်များအောက် ဖင်သားစိုင်များ တုန်ခါနေရာ ဦးမင်နိုင် အဖို့ လိုးမဝ နိုင်အောင် ဖြစ်နေ ရှာ၏။ ” ဘွတ် ဘွတ် … ဖွပ် … ဗျစ် …… အ …… ဆောင့်ဆောင့် … မရပ်နဲ့ “ ဒေါ်စန္ဒာကျော် မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ပါးစပ်မှ ဖွင့်၍ တောင်းဆို နေရပြန်သည်။ ဆောင့်ချက်များ မြန်လာကာ စောက်ပတ် ထဲ လီးဝင်လီးထွက် သံများ ဆူညံလာ၏။ ဦးမင်းနိုင် လီးကြီး စောက်ခေါင်းထဲ တဒုတ်ဒုတ် နှင့် သွေးတိုး လာသဖြင့် ပြီးတော့မည်မှန်း ခံစားသိရှိနေသည်။လီးကြီးအား စောက်ခေါင်း အတွင်းသားများနှင့် ညှစ်ကာ ဖင်ကြီး ဝိုက် ပေးနေစဉ် ဦးမင်းနိုင် လက်နှစ်ဖက်မှာ ခါးကိုင် ထားရာမှ တင်းမောက်နေသော နို့အုံအား ပြောင်းကိုင်ကာ အားရှိသလောက် ဆွဲလိုး နေတော့၏။
” ဖွပ်ဖွပ် … အ … ကောင်းလိုက်တာ … ဘွတ် ဘွတ် … အားဟား … ရှီးးးးးးးးးး … ပြွတ် … ပြွတ်စွပ် … ဒုတ် အ အားးးးးး “ ဒေါ် စန္ဒာကျော် တယောက် တအားအား ညည်းရင်း ဖင်ကြီး ရသလောက် နောက်ပစ် ကော့ထား ပေးလိုက်သည်။ စောက်ခေါင်းထဲ ပူကနဲ့ ခံစားလိုက်ရပြီး လီးအား ဆွဲထုတ် သွားချိန် လရည်များနှင့် စောက်ရည်များ ပေါင်းပြီး ပွက်ကနဲ့ အန်ထွက်လာတော့၏။ ပေါင်ခြံ ထဲ အဖုတ်မှ ထွက်ကျသော အရည်များအား ဦးမင်းနိုင်မှာ လက်ချောင်းဖြင့် သပ်ယူရင်း ပါးစပ်နား ကပ်ပေးရာ ဒေါ်စန္ဒာကျော် တ ယောက် မက်မက် မောမော စုပ်ယူ မျိုချမိနေသည်။ အခန်းထဲ ရေခဲ သေတ္တာ ထဲမှ အအေးဗူး တစ်ဗူးစီ ထုတ်သောက်ရင်း အမော ဖြေ လိုက်ကြ၏။
တဖြည်းဖြည်း ဦးမင်းနိုင် ပြန်ရမည့်ရက်က နီးကပ်လာခဲ့သည်။ လင်ဖြစ်သူ ဦးနေသော်နှင့် ပတ်စပို့ ကိစ္စများလုပ်ကာ နိုင်ငံခြား ပြန် မည့် နောက်ဆုံးည ရောက်ရှိလာ၏။ ထုံးစံအတိုင်း စားကြသောက်ကြဖြင့် အမှောင်ထု ကြီးဆိုးလာရာ ညနက်လာတော့သည်။ ထူး ထူးခြားခြား လင်တော်မောင်အား အိပ်ဆေး မခတ်ခိုင်းသဖြင့် ဘေးမှ အမြည်း ပြင်ဆင်ပေးရင်း အခြေနေ စောင့်ကြည့်နေရပြန်၏။ ” မင်း … ဒီတခါ ပြန်ရင် … အပြီး ပြန်လာကွာ … မင်းနိုင် “ ” အေးပါ … နေသော်ရာ … ငါလည်း မြန်မာပြည်မှာပဲ … အခြေချတော့ မှာပါ … ဟိုက ရှယ်ယာ တွေ အကုန် ရောင်းထုတ်ပြီးတာနဲ့ … ပြန်လာခဲ့မယ် “ လင်ဖြစ်သူ ဦးနေသော်နှင့် စကားပြောရင်း ဦးမင်း နိုင် ခြေထောက် တဖက်မှ စားပွဲခုံအောက်မှ ဆန့်ထွက်လာပြီး ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ပေါင်ကြားထဲ ရောက်ရှိလာသည်။ ကိုယ်လုံးလေး ဆက်ကနဲ့ တုန်ကာ လှမ်းကြည့်စဉ် ဦးမင်းနိုင်မှာ ခပ်တည်တည်ဖြင့် ဦးနေသော်အား စကားပြောနေ၏။ စားပွဲခုံ၏ တောင်ဖက်တွင် ဦးမင်းနိုင် ထိုင်နေပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင် ခုံ၂လုံးတွင် ဒေါ်စန္ဒာကျော်နှင့် ဦးနေသော် ထိုင်နေကြသည်။ ဦးမင်းနိုင်နှင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော် မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေထားမို့ ခြေဆန့်ထုတ်ရာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ပေါင်ကြားတည့်တည့် ထောက်မိ တော့၏။
ခြေမထိပ်လေးမှာ ထမိန်အပြင်မှ ပေါင်ဂွထဲ ထိုးကလော်နေသဖြင့် စောက်ပတ်အုံ ထိပ်ရှိ အစိလေးအား ထိမိစဉ် ဒေါ်စန္ဒာကျော့် ကိုယ်လုံးလေး တုန်တက် သွားသည်။ လင်ဖြစ်သူ ဘေးထားပြီး သူစိမ်း ယောင်္ကျား တယောက်က ခြေမလေးဖြင့် အဖုတ်အား ကလိ ပေးနေ သဖြင့် စိတ်ထဲ တရှိန်းရှိန်းလေးနှင့် လင်တော်မောင် ဦးနေသော်အား ခိုးကြည့်ရင်း ခြေမလေးအား ပေါင်နှင့် ညှပ်ထား လိုက်ပြန်၏။ တဖြည်းဖြည်း ဦးနေသော် စကားများမှာ အာလေး လျှာလေး ဖြစ်လာကာ မူမမှန် တော့ပေ။ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူနှင့် ခွဲခွာတော့မည့် ညမို့ အတိုင်းဆ မရှိ သောက်မိနေသည်။ ခဏအကြာ ဦးနေသော် တယောက် စားပွဲခုံပေါ် ခေါင်းစိုက် သွားတော့၏။
ဦးနေသော် မှောက်သွား သည်နှင့် ဦးမင်းနိုင် မှာ ထရပ်ရင်း ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ဘေးနား လျှောက်လာကာ ဘောင်းဘီ ဇစ်ဖွင့်လိုက် သည်။ မတ်တပ် ရပ်လျက် အနေထားဖြင့် လီးအား ထုတ်ကာ ဒေါ်စန္ဒာကျော် ခေါင်းအား ဆွဲလှည့်ရင်း ပါးစပ်နား လီးထိပ် တေ့ပေး နေ၏။ ” ဟင် … ကိုမင်းနိုင် … ဟို ဟို … “ စကားပြောရင်း လင်တော်မောင် ကြားသွားမည် စိုးသဖြင့် ပါးစပ်လေး လက်နှင့် ပိတ်ကာ ဦးမင်းနိုင်အား မျက်ရိပ် မျက်ကဲ ပြနေသည်။ ” မပူပါနဲ့ … ခုန နေသော့် ဘီယာခွက်ထဲ … ငါ … အရက်တွေ … ရောထည့် ထားလိုက်ပါတယ် “ ” အု … ပလွပ် … ပြွတ် ပြွတ် …… ဝူးးး အု “ ဦးမင်းနိုင်မှာ ပြောလည်းပြော ပါးစပ်အား ဖိလိုးနေသည်။ လိင် နှင့် ပက်သက်ပြီး အထက်စီးမှ ဆက်ဆံခံလိုက်ရတိုင်း သိမ်ငယ်စိတ်လေး ဝင်ရောက်လာပြန်၏။ သို့သော် လင်ဖြစ်သူ၏ အပြုစု အ ယုယနှင် မတူပဲ ကြမ်းကြမ်း တမ်းတမ်း ပြောဆို ဆက်ဆံချိန်ခဏ ထူးဆန်းစွာ သာယာ နေမိပြန်သည်။
” ကောင်းတယ်မလား … ပါးစပ်ကို လီးနဲ့ … လိုးပေးတာ “ ဦးမင်းနိုင်မှာ ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းသော စကားများပြောကာ လီးအားထုတ် ကာ ပါးပြင်နှင့် ပါးစပ်အား လီးတန်ဖြင့် တဘတ်ဘတ် ရိုက်ပေးနေ၏။ ” ကြိုက်လား … ဖြေစမ်း … စန္ဒာ “ မေးလည်းမေး ပါးစပ် ထဲ လီးပြန်ထည့်ကာ အရင်းထိ ဆောင့်လိုးလိုက်ပြန်သည်။ ” အု … ဖလု … ဝေါ …… အင်း ကြိုက်တယ် “ လီးပြန်အထုတ် အသက် လုရှုကာ ပြန်ဖြေလိုက်ရ၏။ ” ခဏနေ … စန္ဒာ့ … လိုးမယ့် လီးကြီး … အားရအောင် စုပ်ထားစမ်း … ရော့ အင့် “ လျှာရဲ့ အထိအတွေ့နှင့် အာခေါင်ပျော့လေး ပွတ်တိုက် မှု့ကြောင့် လီးကြီးက တောင်မတ်ပြီး မာထင်လာရာ ဦးမင်းနိုင်မှာ လည်ပင်ကြော တွေ ထောင်လာပြီး ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ နူတ်ခမ်းဒေါင့်မှ အကျိအချွဲတွေ ထွက်လာမှ လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်ပေးလိုက် တော့၏။
ပြောင်လက်နေတဲ့ လီးကြီးက သူမ မျက်နှာရှေ့ ရမ်းခါနေသည်။ လင်ဖြစ်သူ အမြတ်တနိုး နမ်းရှိုက်နေသော နူတ်ခမ်းလေးအား လီး နှင့် အလိုး ခံလိုက်ရတိုင်း စိတ်ထဲ ဝမ်းနည်းသလိုလို ကျေနပ် သလိုလိုနှင့် ခံစားမှု့က ရှုပ်ထွေးနေ၏။ ” ကောင်းလိုက်တာ … စန္ဒာရာ … နေသော် ခုနေ နိုးလာပြီး … မြင်ရင် … ဘယ်လို နေမလည်း မသိဘူး “ ဦးမင်းနိုင် မှာ ပြောပြီးသည်နှင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ခုံ အား ဆွဲလှည့်ကာ ပေါင်ကြား ဒူးထောက် ခါးညွတ်ရင်း ပေါင်တန်နှစ်ဖက်အား ဆွဲဖြဲလိုက်၏။ ” အာ “ ဒေါ်စန္ဒာကျော် တယောက် လင်ဖြစ်သူ ဘေးထာပြီး သူစိမ်းယောင်္ကျားမှ သူမစောက်ပတ်လေးအား ဖြဲကြည့်နေသဖြင့် မျက်နှာပူကာ ခေါင်းလေး ဘေးလွဲ ထားလိုက်ပြန်သည်။ လင်တော်မောင် နိုးလာမလားဟု တွေးကာ စိတ်ထဲ တရှိန်းရှိန်းလေး ဖြစ်နေရ၏။ ရုတ်တရက် အဖုတ်လေးပေါ် ဦးမင်းနိုင် လျှာဖျားလေး ထိကပ်လာသဖြင့် အတွေးစ ပျက်ကာ ခုံပေါ် ထိုင်လျက်အနေထားနှင့် အောက်ဖက် ငုံ့ကြည့်မိသည်။ ဦးမင်းနိုင်မှာ စောက်ခေါင်းပေါက်လေးမှ စ၍ အစိလေးပေါ်ထိ လျှာအပြားလိုက် ပင့်ယက်ပေးသဖြင့် ဖင်ကြီး အလိုလို ကြွတက် သွားရပြန်၏။ လင်တော်မောင် ဦးနေသော် ခဏတိုင်း ယက်ပေးသော်လည်း ခံစားမှု့က ဒီလောက် မကြွခဲ့ပေ သူမကိုယ်သူမ အံအော နေသည်။
စောက်စိ လေးမှာ ပြူးထွက်လာပြီး စောက်ရေများ အိုင်လာကာ ဖင်ကြားထဲထိ စီးကျလာတော့၏။ အဖုတ်ဘေး နူတ်ခမ်းသား နှစ် ဖက် ဖေါင်းကြွလာရင်း အလိုလျောက် ပေါင်တန်လေး ထပ်ဖြဲကာ ခါးကော့ ပေးနေပြန်သည်။ ထိုစဉ် ဦးမင်းနိုင်မှာ စောက်ပတ် နူတ် ခမ်းသား နှစ်ဖက်အား ဘယ်လက်ဖြင့် ဖြဲကာ ညဘက် လက်ခလယ်ဖြင့် အထက်အောက် ဖိဆွဲပေးလိုက်၏။ ” အ …… ရှီးးးးးးးးး …… အဟင့် ဟင့် “ စောက်ပတ် အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားကလေးများအား လက်ချောင်းထိပ်ဖြင့် ဖိပွတ်ရင်း အက်ကွဲကြောင်း ထိပ်နား မှ အစိလေး ထိုးကလော်ပေးရာ ဒေါ်စန္ဒာကျော် တယောက် အကြောထဲ တဖျင်းဖျင်းနှင့် အရသာ ထူးနေရသည်။ လက်ချောင်းလေး အား အဖုတ်ထဲ ထိုးမွှေရင်း အက်ကွဲကြောင်းအတိုင်း အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲပေးရာ အရည်ကြည်လေးများ စိမ့်ထွက်လာ၏။ ဒေါ် စန္ဒာကျော်မှာ ဘေးမှ မူးမှောက်နေသော လင်တော်မောင်အား ဂရုမစိုက်တော့ပဲ အားမလို အားမရဖြင့် ဖင်ကြီး ကော့ကာ လက်ချောင်းထိပ်နှင့် စောက်ခေါင်းပေါက်အား လိုက်တေ့နေရပြန်သည်။
” ထပြီး … စားပွဲခုံပေါ် ပက်လက် လှန်လိုက် “ ဦးမင်းနိုင်မှာ စားပွဲခုံပေါ် ပက်လက်အနေထားနှင့် ကော့ပျံနေသော ဒေါ်စန္ဒာကျော် အား ကြည့်ရင်း စောက်ပတ်ထဲ ဒစ်မြုတ်ကာ ဖြည်းဖြည်းခြင်း ဖိသွင်းပစ်၏။ တဗျစ်ဗျစ် မြည်သံနှင်အတူ အဖုတ်ထဲ လီးကြီး အရင်းထိ ဝင်သွားတော့သည်။ ” အီး …… ကျွတ်ကျွတ် … ဖြေးဖြေးလုပ်နော် … ရှင့်ဟာက … တုတ်တယ် … ကိုမင်းနိုင် … အဟင့် “ တချက်ထဲနှင့် လီးအရင်းထိ ဝင်လာသဖြင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ မျက်စိမျက်နှာ ပျက်ကာ ဒူးကွေး မြှောက်ပြီး ခုံပေါ် ထောက်ထားသော လက်မောင်းအိုး ၂ဖက်အား ဆုပ်ကိုင် ထားလိုက်၏။ တုတ်ခိုင် ကြီးမားသော လီးကြီးမှာ စောက်ပတ်ထဲ မဆန့်မပြဲ ဝင်ထွက် နေသည်။ ဒူးမြှောက်ခံထားသဖြင့် လီးအရင်းနား ရောက်တိုင်း ကပ်မသွားစေရန် ဒူးဖြင့် တွန်းထားရ၏။ စောက်ခေါင်းဝ လေးမှာ လင်ဖြစ်သူ ဦးနေသော် လီးတချောင်းသာ ဝင်ဘူးသဖြင့် စံချိန်မှီ လီးကြီးအား အံကြိတ်ခံနေရသည်။
မျက်နှာတဝိုက် ချွေးစေးပြန်ကာ အံကြိတ်ခံနေသော မျက်နှာချောချောလေးအား ကြည့်ကာ ဦးမင်းနိုင်မှာ နို့အုံတဖက်အား ကုန်းစို့ ကာ နို့သီးခေါင်း နီတာရဲလေးအား မနာ့တနာ ကိုက်ပေးလိုက်၏။ လီးတဝက်လောက်ပဲ အထုတ်သွင်း လုပ်ကာ လွတ်နေသော နို့အုံ တဖက်အား ညှစ်ချေ ပေးနေတော့သည်။ ခဏအကြာတွင် လီးအရင်းထိ ဆက်ကနဲ့ ဆောင့်လိုးရင်း ခါးအားဖြင့် ဝိုက်ပေးရာ လီး အရင်း အောက်ဖက်မှ လဥနှစ်လုံးမှာ ဒေါ်စန္ဒာကျော် ဖင်ဝလေးအား မထိတထိဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးသလို ဖြစ်နေ၏။ စောက်ခေါင်းထဲ ဒစ်ဖူးကြီးမှ ချိတ်ဆွဲပေးရင်း နို့သီးခေါင်းနှစ်ဖက်အား တလှည့်စီ စို့ပေးနေသဖြင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော်ကလည်း ပေါင်နှစ်ဖက် ဖြဲပေးရင်း မသိမသာလေး ကော့ထိုးနေသည်။ မျက်လုံးရွှဲကြီးများနှင့် ဦးမင်းနိုင်အား စိုက်ကြည့်ကာ တအီးအီးဖြင့် ညည်းသံလေး ပေးလိုက် ပြန်၏။ ဦးမင်းနိုင်မှာ နို့စို့ရင်း မျက်နှာလေးအား အဆက်မပြတ် ကြည့်နေသဖြင့် အကြည့်ချင်းဆုံသည်နှင့် နူတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ် လိုက်သည်။ နို့အုံနှစ်ဖက်အား စုံညှစ်ကာ အရင်းထိ ကပ်ထားသော လီးအား ဒစ်ဖျားနားထိ ထုတ်ကာ တဆုံး ဆောင့်လိုးပစ်၏။
” ဗျစ် … အ …… ဘွတ် … အားးးး ………… အမလေးးး “ စောက်ပတ်ထဲ မဆန့်မပြဲဖြင့် လီးကြီး ဝင်ထွက်နေရာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ရင်ဘတ်လေး ကော့တက်လာပြီး လက်နှစ်ဖက်က ဦးမင်းနိုင် လက်မောင်းအိုး ၂ဖက်အား ကုတ်ခြစ်ပစ်သည်။ ” အီး …… နာလိုက် တာ ကိုမင်းနိုင်ရယ် … အဟင့် ဟင့် … ဖြည်းဖြည်းပဲ လိုးပါနော် “ သို့သော် ဒီတကြိမ် ဦးမင်းနိုင်မှာ မညှာတော့ပဲ ကော့ပျံနေအောင် ဆောင့်လိုးပစ်၏။ လီးကြီး ဝင်သွားတိုင်း ဒေါ်စန္ဒာကျော့် စောက်ပတ်နူတ်ခမ်း သားလေးမှာ လိပ်ပါသွားကာ လီးပြန်အထုတ်တွင် အပြင်သို့ ဖေါင်းကားပါလာပြန်သည်။ စောက်ခေါင်း အတွင်းသားများအား လီးအရည်ပြား တင်းတင်းဖြင့် ပွတ်ဆွဲခံရသဖြင့် နာ လည်းနာ ကောင်းလည်းကောင်း အရသာ ၂မျိုး တပြိုင်ထဲ ခံစားနေ၏။ ဦးမင်းနိုင်မှာ မနားတမ်း ဖိလိုးရင်း ခါးအားဖြင့် ကြိတ်မွှေကာ တချက်ချင်း ဆောင့်လိုးပေးပြန်သည်။
တဖြည်းဖြည်း စောက်ရည်ကြည်လေးများ ထွက်လာကာ တဇွိဇွိ တဇွပ်ဇွပ်ဖြင့် လီးအရသာ တွေ့လာရ၏။ လီးကြီး ပြန်အထုတ်တွင် စောက်ခေါင်း ထဲ ဟာသွားသဖြင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ ဖင်ကြီးကြွလာပြီး လီးအရင်းထိ လိုက်ကပ်ပေးနေမိတော့သည်။ အသံမ ထွက်အောင် အံတင်းတင်းကြိတ်ရင်း ဖင်ကြီးအား ကော့ကော့ ပေးနေမိတော့၏။ ” ရှီးးးး … အားဟား … အင့် … စန္ဒာ လေးဘက် ကုန်း လိုက် “ အလိုးခံ ကောင်းနေစဉ် ဦးမင်းနိုင် စကားကြောင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော် တယောက် တုံ့ဆိုင်းတုံ့ဆိုင်းဖြစ်သွားပေမယ့် ဦးမင်း နိုင်မှာ လီးအား စောက်ပတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်၏။ ရှက်လည်းရှက် ကာမအရှိန်လည်း တက်နေသဖြင့် မြန်မြန်ပြီးသွားစေရန် စားပွဲခုံ ပေါ်တွင် လေးဘက်ထောက် ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ဦးမင်းနိုင်မှာ ခါးအား လက်ဖြင့်ဖိကာ ဒူးခေါင်း ၂ဖက်အား ကားခိုင်းရင်း ဖင်ကြား မှ ပြူးထွက်နေသော အဖုတ် အက်ကွဲကြောင်းထဲ လီးဖြင့် အထက်အောက် ပွတ်သပ်ပေးကာ တချက်ထဲ လီးအရင်းထိဝင်အောင် ဆောင့်သွင်းပြန်၏။ ဒေါ်စန္ဒာကျော် တယောက် အသံမထွက်အောင် ထိန်းထားသည့်ကြားမှ အားကနဲ့ အော်မိလိုက်ပြန်သည်။
” အားးးးး အမေ့ … သေပါပြီ …… ကျွတ်ကျွတ် “ အသံကအနည်းငယ် ကျယ်သွားသဖြင့် မူးအိပ်နေသော လင်ဖြစ်သူများ ကြား သွားမလားဟု စိုးရိမ်နေသော်လည်း ဦးမင်းနိုင်မှာ ဆွဲဆွဲ လိုးနေတော့၏။ ဆောင့်ချက်က ထိထိမိမိနှင့် စောက်ခေါင်းအတွင်းသား ထဲ ဒစ်ကြီးမှ ပွတ်ဆွဲနေရာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ ဖင်ကြီးကော့ကာ လီးဝင်လာတိုင်း နောက်ပြန်ပြန်ဆောင့်ပေး လိုက်ပြန်သည်။ ” အို အို … ကောင်းလာပြီ ကိုမင်းနိုင်ရယ် … စန္ဒာ ခံနိုင်ပါပြီ … စိတ်ကြိုက်သာ လိုးတော့ … အ အားးး အားးးး ……… “ ဦးမင်းနိုင်မှာ တုတ် ခိုင်သောလီးကြီးနှင့် စောက်ဖုတ်ထဲ ပစ်လိုးရင်း နို့အုံ နှစ်ဖက်အား ဆုပ်ချေပေးနေ၏။ ” ဘွတ် … အ … ဗျစ် ဗျစ် … အမလေး … ကျွတ် “ လီးကြီးမှာ အဖုတ်ထဲ စီးကျပ်နေပြီး ဆောင့်အားကလည်း အားပါသဖြင့် ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာ စုပ်သပ်ညည်းကာ စိတ်တွေ ဆောက်တည်ရာမရပဲ ဖင်ကြီးထောင်ကာ ရှေ့ကိုယ်လုံးအား ခုံပေါ် ပိပြားနေအောင် ကပ်ထား လိုက်၏။ သားအိမ်ဝ ဒုတ်ခနဲ့ လာလာ ဆောင့်သဖြင့် အံကြိတ်ကာ တောင့်ခံနေရင်း စောက်ရည်များ ပန်းထုတ် ပစ်တော့သည်။ ထိုစဉ် မူးအိပ်နေသော ဦးနေသော် နိုးလာ ကာ အိပ်ချင်မူးတူးဖြင့် အိမ်သာဘက် သေး သွား ပေါက်ရာ ဦးမင်းနိုင်မှာ လီးအား အမြန် ပြန်ထုတ် ကာ အရင်ထိုင်ခဲ့သော ထိုင်ခုံပေါ် ပြန်ထိုင် နေလိုက်၏။
ဒေါ်စန္ဒာကျော်မှာလည်း ခုံပေါ်မှ ဆင်းကာ အရက် ပုလင်းများ ဘီယာပုလင်းများ သိမ်းဆည်း နေတော့သည်။ နောက်ရက် မနက် လင်မယား ၂ယောက်လုံး ဦးမင်းနိုင် အား လေယဉ်ကွင်း လိုက်ပို့ရာ ဦးနေသော်မှာ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူအား မြန်မာပြည် အမြန် ပြန်လာရန် ပြောနေရှာ၏။ ” မင်း ရှယ်ယာတွေ … အကုန်ရောင်းပြီး … အမြန် ပြန်လာကွာ … မင်းနိုင် “ ” အေးပါ … နေသော်ရာ … မင်းကသာ ဇွတ်ခေါ်နေတာ … မင်း မိန်းမ က … မလှုပ်ပါလား “ ” ဟမ် … စန္ဒာကလည်း … ကိုမင်းနိုင် ကို … မျော်နေပါ့မယ်ရှင် “ ဒေါ်စန္ဒာကျော့် စကားကြောင့် ဦးမင်းနိုင် မျက်နှာကြီး ပြုံးရွှင် သွားရာ ထိုအပြုံးကိုတော့ ဦးနေသော် တယောက် နားလည်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ စိတ်ကူးယဉ် ဇတ်လမ်း လေးအား ဒီမှာပဲ ရပ်နားရင်း စ/ဆုံး ဖတ်ရှု့ပေးသော မိတ်ဆွေများအား ကျေးဇူး တင်ရှိ ပါသည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကြောငျးပိတျရကျတိုငျး သတိရနမှောပါ